Porn-related ED5၏ပုံပြင်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - အပိုင်း ၈ တွဲ
Porn-related ED5၏ပုံပြင်များသည်အပိုင်း ၈ ပိုင်းပါသောပုံပြင်များဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသားများမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ဤ porn-induced ED thread နှင့် forum section ကိုကြည့်ပါ။
အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, သင်အဘယ်သူမျှမ FAP ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ငါနောက်ဆုံးတော့ကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ကအားလုံးကို YBOP နှင့် NoFap ကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်တကြယ်ပွင့်အားကစားသမားကြီးနှင့်ကျောင်းအတွက်ကောင်းစွာပြု၏သော်လည်းမိန်းကလေးများနှင့်အတူစကားပြောသောအခါငါအလွန်နိမ့်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါကျနော်အရာတခုတညဉ့်ရပ်တည်ချက် type ကိုကြိုးစားကြလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းအပြည့်အဝနှိုးဆော်ခြင်းရရန်ပျက်ကွက်လိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ, ငါကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျွန်တော်စတင်ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံဖို့အချိန်တုန်းကငါအပြည့်အဝစိုက်ထူနိုင်ဘူး။ သူမသည်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိုးရိမ်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်ကာကျွန်ုပ်အားအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်လက်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့နှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုကိုအတူတကွထားလိုက်ပြီးကျွန်တော့် POM ကပြproblemနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ YBOP ကိုရှာပြီးငါ့ဘဝကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် PM ကို ၃၇ ရက်လုံးလုံးအပြည့်အ ၀ လွတ်မြောက်စေခဲ့သော်လည်းအမှန်တကယ်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုခဲ့ပါ။ အနည်းငယ်သော“ အကူအညီ” ဖြင့်ကျွန်ုပ်အပြည့်အ ၀ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ ငါအနည်းငယ်ထုံနေဆဲ (သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စဉ်အတွင်းယောက်ျားတစ်ယောက် imo မိန်းကလေး outlast မဖြစ်သင့်) ။ နေရာတကာမှာလှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုငါတွေ့ရပေမဲ့ငါ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမြင့်တက်လာပြီးလိင်ဆိုင်ရာတွန်းအားတွေလည်းပြန်လုပ်လာတယ်။ ငါဒီ site ပေါ်တွင်မျှဝေသောသူအပေါင်းတို့ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်တယ်နှင့်ငါ့ကိုထောက်ခံမှုပေးပြီ! အဘယ်သူမျှမ P ကိုအစဉ်အဆက်ကနီးပါးငါ့အသက်ကိုပျက်စီး။
ငါ PMO မိန်းကလေးငယ်များနဲ့ငါ့ပြဿနာများ၏အများစုဖြစ်စေတဲ့ခဲ့သည်ကိုငါသိ၏။ NoFap ကျိန်းသေငါလိုအပ်တစ်ခုခုခဲ့တုန်းပဲလိုအပ်ပါတယ်။ မှာအလုပ်လုပ်နေထားပါ။ ငါအချို့သစ်ကိုဝါသနာအထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်း, ကကူညီပေးခဲ့တဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါဒီမှတ်ချက်တွေအများကြီးဖတ်နေခဲ့တာ။ အရမ်းအားတက်စရာကောင်းပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရဲ့ MB ပုံပြင်တွေကိုဖတ်ရတာကျွန်တော်မခံစားရဘူး။ ဟားဟား။ အလေးအနက်ထားပေမယ့်ယခုငါ 1 နေ့၌ဖြစ်၏။ ကံကောင်းပါစေငါဒီမှာဖတ်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေလိုပြproblemsနာတွေအားလုံးအတူတူပဲ။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောထူးခြားချက်မှာကျွန်ုပ်၏လက်ဝဲလက်ကို သုံး၍ (ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သောသူဖြစ်သော်လည်း) ကျွန်ုပ်သည်ထူးဆန်းသော fetish ထဲသို့ပြန် ၀ င်လေ့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်အထိလိင်ဆက်ဆံရန်စောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလိင်ကိုအရမ်းအလေးအနက်ထားသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် (ကျွန်ုပ်သည်မည်သူ့ကိုမျှလိင်မှုကိစ္စအတွက်သာအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါ) ကျွန်ုပ်စောင့်မျှော်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာသင် MB ထုတ်သောအခါအလွန်လွယ်ကူသည်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ငါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတကယ်တော့ဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့တကယ့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးစုံတွဲကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ငါဒါအတွက်အများကြီးလှောင်ပြောင်ရပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားငါပဲစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါဟာပွင့်လန်းလန်းဆန်းလွန်းပြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အစောပိုင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု (STDs, ငြင်းပယ်မှု၊ အတင်းအဖျင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွယ်တာမှုတွေ) ထဲဝင်ဖို့အတားအဆီးတွေကငါ့အတွက်အရမ်းများလွန်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့။ မဟုတ်ရင်မင်းကမင်းက LIFE ကိုဘယ်လောက်အထိပြောနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်။
ငါဆိုလိုတာကအခုတော့ငါနောက်ဆုံးတော့ဇနီးနဲ့ကလေးတွေအကြောင်းစဉ်းစားနေပြီးငါလုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်။ ရပါတယ်; ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းခက်ဖို့မကြိုးစားဘူး ဒီလိုမျိုးမျိုးကိုဘယ်သူမှသင့်ကိုမပြောပြဘူး။ လူတိုင်းကသင့်ကိုအလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေချင်တယ်၊ MB သည်ထိုကဲ့သို့သောကျဉ်းမြောင်းသောစိတ်နေထိုင်မှုပုံစံမှထွက်ပေါ်လာသည့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကမှသာကျွန်တော်ပေါ့လာသည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တွင်ကျွန်ုပ်၌ပထမဆုံး gf ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းအရပထမဆုံး gf ရှိခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ဒီကိစ္စဟာသိပ်ပြီးဆိုးဝါးစွာအဆုံးသတ်သွားတာပါပဲ။ ကျွန်တော်မခဲယဉ်းနိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့ဒါကိုကိုင်တွယ်လို့မရဘူး၊ အခြေအနေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာကိုလည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ ငါသူမနှင့်အတူရှိခဲ့တုန်းကငါအသစ်အဆန်းအချက်ကြောင့်, တကယ်ပဲခက်ခဲရနိုင်ပေမယ့်မကြာမီကြောင်းပြတ်သွားတယ်။ ငါအော်ဂဇင်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိလို့ပဲသူမအတွက်အပျိုစင်ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးခဲ့ပါဘူး။ ဒါကနာကျင်မှုခံစားချက်တွေအများကြီးဖန်တီးခဲ့တော်တော်လေးဆိုးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အပျိုစင်ဘ ၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်နောက်ဆုံးသူမ၏ရည်းစားကကျွန်ုပ်ကိုတကယ်အားပေးမှုများစွာပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တင့်တယ်လှပသောလူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည် (နောက်ဆုံးတွင်ငါမရှိဘဲပြောရန်အရွယ်ရောက်နေပြီဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်) မည်သည့်အတ္တဆန်မှု) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပါစေဒီပြproblemနာကခင်ဗျားရဲ့ပုလ်ကိုတကယ်နာကျင်စေတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလှည့်စားတဲ့အခါမင်းဟာယောက်ျားလိုပဲခံစားရတယ်၊ MB မှာဘာနဲ့မှမတူနိုင်ဘူး။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်ဆေးတွေလိုအပ်တယ်ထင်တယ်။ ဒါမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီချဉ်းကပ်မှုကကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကျွန်ုပ်ဒီမှာဖတ်ပြီးသောအရာကိုမှယုံကြည်ကြသည်။ ဒါ့အပြင် npr.com ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပဲဂျပန်လူမျိုး herbivore men များအကြောင်းရေးတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ပြီး၊ တူညီတဲ့ပြhavingနာရှိနေသည်ဟုထင်သည်။ ဇာတိထက် virtual sex ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။
မင်္ဂလာပါလူတိုင်းငါမှတ်ချက်တွေအပေါငျးတို့သဖတ်နေခဲ့တာနဲ့ကျွန်မလည်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူဖြစ်၏။ ငါ 20 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မ 6-1 ကြိမ်အကြားကအနည်းဆုံး4နှစ်ပေါင်းတစ်နေ့အဘို့နေ့တိုင်း porn မှ masturbating ခဲ့တာ။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်ရည်းစားအသစ်ရရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြင့်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဒီနေ့ "လှည့်ပတ်အရူး" ခံခဲ့ရသည်နဲ့ကျွန်မခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ငါ့ကို ******* စတင်ခဲ့ပြီး2စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင်ငါပျော့ပျောင်းသွားတယ်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုကြည့်လိုက်ပြီး“ ဘာဖြစ်တာလဲ?” ကျွန်တော်စကားပြောရုံတင်မကဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည် porn သို့မဟုတ် masturbation အရာ ၂ ရက်ကိုစတင်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သငျသညျဈဤသူအပေါင်းတို့ဝန်ခံရန်လွယ်ကူမယ့်ကိုသိနှင့်ငါကအားလုံးကိုအကြောင်းကိုရှက်မိပါတယ် posted သောအင်ဖိုအတွက်သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ဒီအားလုံးအလုပ်ကိုယ့်ကိုတကယ်ကဒီမိန်းကလေးနဲ့တူသောကွောငျ့လိမ့်မည်ငါလိင်ရှိသည်သို့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အညစ်ညမ်းစွဲ၏ဘာမှမပွုနိုငျကွောငျးကိုသူမ၏ပြောပြရန်ရှိသည်ဖို့ချင်ကြပါဘူး။ ငါ့ကိုကံဆန္ဒရှိ🙂နေ့ 1 NOW ကအစပြု
ပထမ ၁။ အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်၏ ED အကြောင်းဆရာဝန်အနည်းငယ်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အထူးပြုဆေးခန်းများပင်၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်က M နှင့် P အကြောင်းအလွန်အကျွံမပြောခဲ့ပါ။။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းသိသော်လည်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ MB သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးစျေးပေါသောပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။ ငါနဲ့စဖို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘာရောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်မိချင်တယ်။
ယနေ့ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါ MB မည်မဟုတ်ရည်းစားရှိသကဲ့သို့ငါနောက်တဖန် P ကိုအကြည့်အရှုဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုရှင်းရှင်းယုံကြည်တယ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ။ ငါရှောင်ကြဉ်သည်မည်မျှထိရောက်နှင့် ပတ်သက်. ဤမျှလောက်များစွာသောထောက်ခံစာကိုဖတ်ရှုကြောင့်ငါသည်ဤငါတို့သိကြ၏။ ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်များမျှဝေဘို့သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသာကဒီမှာအများဆုံးလူတို့သညျမညျသူမဆိုနှင့်အတူစကားလက်ဆုံ၌ဤဆောင်ခဲ့ပေမယ့်အမည်ဝှက်, ဒီဖိုရမ်ပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အခမဲ့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒီစွဲလမ်းမှုကိုအောင်နိုင်တဲ့အခြားသူတွေအကြောင်းကြားပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒါကိုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပျက်စီးစေတဲ့အကျင့်တွေကိုငါပြန်နင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပဲငါသိတယ်။ ငါမှတ်မိသမျှကာလပတ်လုံးငါစိတ်ဟာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အပြစ်ရှိတယ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံမုန်းတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အားရှေ့သို့တက်ရန်တွန်းအားပေးသောတစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် MB မပါဘဲဘဝတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်စေသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ယခုဘဝသည်လများစွာနှင့်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ ငါစောစောစီးစီးအားသွင်းမယူဘို့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန်လိမ့်မည်။ အဲ့တာဘဝပဲ။
မွေးဖွားခဲ့ပြီး-နောက်တဖန် Porn ဗာဂျင်း (Fame ၏ခန်းမထဲမှာလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း)
ဟိုင်းရောဘတ်ပါ ကျွန်ုပ်သည်အသက် (၂၀) ​​အရွယ်ကော့ကေးဆပ်အမျိုးသား၊ အညိုရောင်ဆံပင်ညှပ်၊ မျက်လုံးပြာ၊ ၆'၄″ နှင့် ၂၅၀ ပေါင်၊ ငါ Asperger's Syndrome ရောဂါခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၃ နှစ်မှ ၁ လကြာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်အလေးချိန်တက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၃ နှစ်အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏အလေ့အကျင့်သည်အသက် ၉ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်းရှိ Google ၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောဓါတ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်စူးစမ်းလိုစိတ်မှစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါအဲဒိပုံတွေကိုကြည့်ရတာအ ၀ တ်မပါတဲ့ anime မိန်းကလေးပုံတွေအပါအ ၀ င်၊ ၁၃-၁၄ မှာ hardcore porn ကိုတောင်ရှာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မိဘများကသူတို့ကိုအနီးကပ်အဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေချိန်၌ပင်ကျွန်ုပ်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ယခု MO နှင့် ပတ်သက်၍ ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်လိင်တံကိုသုတ်ပဝါဖြင့်ကြိတ်ခြင်းဖြင့်သုတ်လိမ်းသည်။ (ဗီဒီယိုဂိမ်း controller ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကစားသည့်အခါခလုတ်များလျင်မြန်စွာခလုတ်ကိုနှိပ်မိသောအခါ၌ပင်ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်) ငါတကယ်စတင်ခဲ့သည် အဲဒီအချိန်ကစပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးလာပြီးအကျင့်ဆိုးတွေ၊ နှစ်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကဆိုးရွားလာတယ်။ မိဘတွေကသူတို့နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့မိတဲ့အခါငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမသိဘူးလို့သူတို့ကိုငါမုန်းတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါငါအမြဲတမ်းသစ္စာကတိပြုခဲ့တယ် ကွန်ပျူတာကသူတို့သမိုင်းကိုမြင်နိုင်မလားလို့မေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းကြောက်လွန်းတဲ့လိမ်ညာသူပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ငါ့လိင်စိတ်နိုးထမှု (ငါကလေးလေးတစ်ယောက်တောင်မှအမြဲတမ်းချိုသာလွန်းခဲ့တယ်) ငါရရှိခဲ့တဲ့အဟောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားစေခဲ့တယ်၊ ငါအထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းကတောင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်ဖို့တောင်မနှိုးခဲ့ဘူး တကယ်တော့လွန်ခဲ့သော ၆ လခန့်ကကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏အိုင်ပေါ့ဒ် (ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကရရှိခဲ့သော) ကျွန်ုပ်၏ iPod တွင်အပျော်သဘောလိင်ဆက်ဆံမှုဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သတိပြုမိသည်ကကျွန်ုပ်ကြည့်နေစဉ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပင်အားစိုက်ထုတ်။ မရနိုင်ပါ။ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး .. နားလည်အောင်လုပ်တာကတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်အထိဖြစ်ခဲ့တာလေ။ ဒါဟာအရမ်းကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ ငါ ED ရဲ့အဆိုးဆုံးကိစ္စမှာပဲ!
ငါထို့နောက်ငါ L ကိုမိုင်နိုအက်စစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ, porn နှင့်လည်းဖိန်းဓာတ် (အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင်းဆုံးစံချိန်ဖြစ်သည့်) 10 ရက်ပေါင်းချွတ်။ ဒါဟာငါဆေးပြားယူပြီးစတင်ကတည်းကပိုကောင်းတယ် (နှင့်နောက်တဖန်ခက်ဖြစ်ခြင်းစဉ်ဖြစ်ချင်နိုင်ခဲ့သည်) ဒါပေမဲ့သူတို့ပြဿနာကိုကူညီခြင်းမခံခဲ့ရပါ, သူတို့ကသာပြဿနာကိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ငါအပြည့်အဝ PMO အမြဲငါ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နဲ့ကျွန်မအနေနဲ့အတိုင်းအတာအထိတိုးတက်သောငါ၏များသောအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အဆိုးမြင်သဘောထားနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ခဲ့သည်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်ရှိရာအမှတ်ရတယ်။
ငါ၌မကောင်းသောလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများမရှိ၊ ယုံကြည်မှုလည်းမရှိပေ။ သို့သော်၎င်းသည်မှန်ကန်သင့်သည်ထက်များစွာလျော့နည်းခဲ့သည်။ ငါရှက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း၊ ဘာကြောင့်မိန်းကလေးရနိုင်တာလဲ၊ မရှိလို့ (ကြာကြာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုဆုပ်ကိုင်ထားလို့မရဘူး၊ သူတို့က“ ငါ့အတွက်မှန်ကန်တယ်လို့မထင်ဘူး”) ဘာကြောင့်ငါစိတ်ဓာတ်ကျရတာလဲလို့တွေးမိတယ်။ ငါဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြိုက်တာလဲ ED ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ၅ လအကြာ၊ ၈ ပတ်နီးပါးအကြာမှာငါနောက်ဆုံးမှာတော့သုတေသနအချို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ ထပ်မံ၍ မကြည့်နိုင်သေးဘူး၊ ငါတကယ်သတိထားမိတာက porn က ED တကယ်ဖြစ်လာတာလားဆိုတာကြည့်ဖို့ YourBrainOnPorn.com ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ပြtheနာကပဲပြwasနာမဟုတ်ဘဲငါ့ရဲ့အမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်။
ဒါကကျွန်တော်ငြင်းမရခဲ့ရင်၊ ဒီခရီးစဉ်မှာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၃ ရက်ကြာအောင်ပြန်လည်မတင်မှီ ၂ ရက်ကြာညစ်ညမ်းမှု ၉ ကြိမ်ဆက်တိုက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်။ အားနည်းလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာငါတကယ်စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လာတယ်။
ညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေ၊ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့မင်းသမီးတွေအတွက်မကောင်းဆိုးဝါးယုတ်ညံ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်တဲ့လူတွေဟာအခုထိငါယုံကြည်နေပြီ။ နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ iPod ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရလာတဲ့အခါငါ့အလေ့အထတွေကအရမ်းဆိုးလာတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသီးသန့်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် BBW နှင့် SSBBW များ၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗွီဒီယိုများကိုတောင်မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ငါမိန်းကလေးများနှင့်2ဖလားနှင့် 1 ယောက်ျားများ &2မြင်းဗီဒီယိုများကိုမြင်လျှင်ပေမယ့်, သော်လည်းတိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်မစင် porn နှင့်အတူ Tranny, လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်သို့ဘယ်တော့မှမ။ နှစ် ဦး စလုံးမကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည် .. စောင့်ကြည့်ဘယ်တော့မှမ။
ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့နေ့တွေမှာငါ့ဘဝဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာအခုငါကြည့်နေတယ်။ ငါနောက်ဆုံးပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတစ်ပတ်ကျော်ကျော်သွားပြီ။ ငါပြန်ပြင်မလာမီငါ၌ရှိသောဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများ၊ အမှတ်အသားပြုထားမှုများနှင့်သမိုင်းကြောင်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ထိုအခါငါနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ခဲ့ပါ။ အတိတ်ကာလ၌ (ကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ) ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ဝေးဝေးနေတိုင်းအမြဲတစေတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ် (ထိုအချိန်ကဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်း) ရှိခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံး၌၊ ငါဘယ်တော့မှ porn ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်အတွက်သာတင်ထားရန်စောင့်ဆိုင်းရုံသာပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
အခုတော့သတင်းကောင်းအတွက်၊ နောက်တခါအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားလာတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိကထားပြီးပိုပြီးဂရုစိုက်တတ်လာတယ်၊ ငါ့ရဲ့လူမှုရေးစွမ်းရည်တွေပိုကောင်းလာတယ် (ပြီးတော့အဲဒါကိုဒီထက်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တွန်းအားပေးတာ)၊ ဒေါသ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပျင်းစရာပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်း (testosterone ဟော်မုန်းတိုးလာမှုကြောင့် abstinence ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော testosterone ဟော်မုန်းကြောင့်ဘတ်စကက်ဘောကွင်းကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်။ ခုန်နိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြွက်သားတည်ဆောက်ပုံ၊ အသံသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည် (testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်နှစ်မျိုးလုံး) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကိုတိုးတက်လာသည်။ အမျိုးသမီးများအားဆွဲဆောင်ရန်နှင့်၎င်းတို့နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လူများပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်
ငါအခုထိတောအုပ်ထဲမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိတယ်၊ တကယ်တော့ငါဝေးနေပြီ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲလမ်းမှုပြန်ကောင်းလာအောင်လုပ်ခြင်း / ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရေးသားချက်များကိုငါဖတ်နေတယ်၊ ​​ဒီပို့စ်များကငါ့ကိုအားပေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဆက်သွားဖို့ ဒီ post ကိုဖတ်ရှုဖို့အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
wow, ဒါကြောင့်ငါမတိုင်မီရှိတယ်ဘယ်တော့မှသောသက်တံ့၏အဆုံးအပျေါမှာလဲကြပြီယုံကြည်သော်လည်း, သင်သည်၏ပုံအများအပြားရှိ။ အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အကြားအဆင့် ၆ တန်းရှိပြီး၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၊ သင်အမြဲတမ်းသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း၊ အိမ်သို့ပြန်ခြင်း၊ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လာခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ချိတ်ဆက်ခြင်း (သို့) ပြီးခဲ့သည့်အတွက်တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာကစားခဲ့သည်။ ၈ နှစ် (ယခု ၂၁ နှစ်) သည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟုအမြဲထင်မြင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်သည်မှန်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အဓိကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကမသိရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင်အထက်တန်းကျောင်းနောက်ဆုံး ၃ နှစ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည် သူမသည် ၉ တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီး၊ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း PMO ဖြစ်ဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေခဲ့ပါ။ ထို့နောက်သူမအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အ ၀ စိုက်ထူ။ မရနိုင်ပါ။ ငါ PM နှင့်အတူနိုင်ခဲ့သည်သလောက်ငါကိုယ်ကအရက်အပေါ်အပြစ်တင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကပိုကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သောအခါမူကားကောင်းစွာကြောင့်တူညီတဲ့သဘောတူညီချက်ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါ့ထွက်ရဖို့ P ကို ​​/ M ကမှကြည့်လျှင်, အစဉ်မပြတ်ငါသူမ၏နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုမျိုးစဉ်အတွင်းငါက hard မရနိုငျသောကြောင့်လိုက်တယ်တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် ငါတကယ်မယ့်အချက်ကိုအတိတ်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ကောင်းစွာကြောင့်လျစ်လျူရှု, ငါ့ကိုနှင့် gf အသစ်တစ်ခုမိန်းကလေးတယ်တက်ဖဲ့နှင့်အသစ်မိန်းကလေးကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်သစ်စိုက်ထူ? လာဖို့ပိုနှစ်ပေါင်းဒါ porn နှင့်အတူငါ !, ပူစီနံခဲ့သည် နောက်ကျော P ကို ​​/ M ကမှ Nope တူညီတဲ့အဟောင်းပုံပြင်နှင့်ဈကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2ခဲ့ သွား. ယခု 21 မှာငါတကယ်တော့သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းရှာနေတာကြောင့်ကောင်းစွာကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေဤမျှလောက်များစွာသောပြီးသားကြုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့လိင်ဘဝချင်နဲ့ ငါရာအရပျထဲကခံစားရတယ်, ဒါမှမဟုတ်အုပ်စုလူစိမ်း (သို့သော်ဒီအားလုံးငါ့ဦးခေါင်းသည်ကိုငါတကယ်ကသူတို့ကိုသိစေပါဘူး) နေကြသည်။
၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုကိုအလွန်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသစ်များနှင့်သိကျွမ်းရန်ကြိုးစားခြင်းကိုပင်အနှောင့်အယှက်မပေးသောနေရာသည်၎င်းနေရာကိုရောက်ရန်ကျွန်ုပ်ကြောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မကျေနပ်မှုတစ်ခုစိုက်ထူရန်လိုအပ်ပါတယ်, ငါရုံအရှက်ခံရလိမ့်မယ်, ငါ့ရှိပြီးသားယုံကြည်မှုကရှိပြီးသားထက်နိမ့်သွား, ငါကငါ့ယုံကြည်မှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပေမယ့်ယေဘုယျရှုထောင့်၌သာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒီတော့မင်းတော်တော်များများလိုပဲငါ wtf ထလာပြီ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ ok ပြန်သွားနေတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးရှာဖွေခဲ့တယ်၊ သေချာတာကတော့ငါလုပ်ခဲ့မိတယ်၊ စိတ်ထဲမှာနောက်ကွယ်မှာမှန်တယ်လို့မခံစားရပေမယ့်ငါက ဒါကပဲမဟုတ်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အချက်ကိုသိသည်။ ပျော်စရာတော့မရှိတော့ဘူး P ကိုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြည့်တယ်။
* ငါရေးဖို့အများကြီးရှိခဲ့တယ်မသိခဲ့ပါ *
ငါခံစားခဲ့ရတာကမင်းကိုယောက်ျားတွေနဲ့ကောင်လေးတွေကိုငါဘယ်ကလာတာလဲဆိုတာကိုပြောပြခွင့်ပေးခဲ့တာပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတွေကိုဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်တော့်ကိုမျှော်လင့်ချက်များစွာပေးနေတယ်။ အခုငါဒီစွဲလမ်းမှုဟာငါ့ဘဝမှာအဓိကပြproblemနာဖြစ်ပြီးရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်လာပြီ။ ဒီတော့အခု PMO မရှိတော့ဘူး။ မင်းတို့ယောက်ျားတွေကအမှန်တရားကိုပြောနေကြတယ်။ ဒီမှာ **** ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ငွေအမြောက်အများလောက်ပဲမဟုတ်တော့ဘူး၊ ငါဟာကြီးကျယ်တဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့၊ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံကြိုးစားခဲ့ဘယ်မှာပြန်ယုံကြည်မှု။ ငါဒီဟာတက်ကြွတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းကံကောင်းပါစေ
အိုကေ, ဒါကြောင့်နောက်ကျောဇွန်လထဲမှာကျွန်မလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ copulatory ED ရှိခြင်းနှင့် reboot ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပုံမှန်ရှိကြ၏။ ကျုံ့နှင့်မျှမတို့လိင်စိတ်။ ပဌမလ၏အဆုံးအားဖြင့်, ငါကျရောက်နေတဲ့-အနေအထားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဲ့သို့တူညီသောပညာရေးပြဿနာများအချို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ဘဝမှာသာဓကလက်တဆုပ်စာ မှလွဲ. ကျွန်မအမြဲတမ်းကျရောက်နေတဲ့အနေအထား masturbated ပါပြီ။ တစ်ခါတုန်းကများအတွက်ပုံမှန်လမ်းကြိုးစား masturbate ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်သောအခါ, ရတာဟာခဲ့, ငါတစ်ထောင့်လှည့်ခဲ့တူသောငါခံစားရတယ်။ ကြှနျတေျာ့လိင်အင်္ဂါရဲ့အရွယ်အစားပြုသကဲ့သို့ကြောင်းအချက်အနေဖြင့်ရှေ့ဆက်ငါ့အလိင်စိတ်, တိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အပြည့်အဝနှစ်ဦးစလုံးသဘောဆောင်သောစိုက်ထူ, ဘုံရှိကြ၏။ ငါအခါသမယအပေါ် masturbating စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်လည်းအပြန်အလှန်ငါ Skype ကိုကျော်သိတယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ငါကတည်းကပြန်ကျရောက်နေတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့သွားပြီကြပြီမဟုတ်။
သြဂုတ်လရောက်ရင်ငါလုံးဝပျောက်ကင်းမယ်၊ ထိုအခါမူကား chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ပထမတော့ငါအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်အချို့ကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အဲဒီနောက် ၃ ကြိမ်သီးခြားလိင်တူချစ်သူများကိုကျွန်တော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်ချက်ချင်းသတိမပြုမိသော်လည်းကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်အားလုံးကိုရှုပ်ထွေးနေကြောင်းသိသည်။ ငါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေသည့်အရာနှစ်ခုရှိသည်။ ငါတွန်းလှန်သောအမျိုးအစားသည်နောက်တစ်ခါထပ်မံညစ်ပတ်နေစေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အနေနှင့်အလွန်ခက်သည်။ ငါ၌သတိပြုသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောအကူအညီမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် Skype ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့စဉ်၌ငါသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
ငါနောက်ဆုံးပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ပြန်ဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါက ၆ ရက်ရှိပြီ။ ငါပြန်စတုရန်း ၁ ကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ခါးကနေသေနေပြီ။ ရေကျုံ့နေတယ်။ ဘာမှမရှိဘူး။ ငါ (အများအားဖြင့်နံနက်ယံ၌) (အနိုင်နိုင်) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပေမယ့်ပါတယ်။ လေးရက်မှာငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်။ ကျွန်မတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူမှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလုပ်ဖို့သူတို့မလုံလောက်ဘူး၊ သူမလက်ကငါ့ဘောင်းဘီထဲကိုတွန့်လာတာနဲ့အမျှသူမကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်တယ်။ လိင်။
သူမအားလပ်ရက်ကနေပြန်လာပြီး ၁၀ ရက်အကြာမှာဒီမိန်းကလေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ ဦး မှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စပြုချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကပြန်ဖွင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကိုလုပ်နိုင်မှာကိုစိုးရိမ်တာကပိုဆိုးလာတယ်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ငါအရင်ကထက်ပိုမိုစိတ်ပျက်ခံစားရတယ်။
ငါ၏အ 365 နေ့ကလူနေမှုပုံစံစတဲ့, neuroplasticty, စွဲလမ်းပြန်ဖွင့်
ရှည်လျားသောပုံပြင်တိုတိုအောင်ငါ 21 အသက်အနှစ်ဖြစ်၏။ ငါ 2nd တန်းကတည်းက masturbating ပါပြီ။ ငါ 5th တန်းတဝိုက် Porn သုံးပြီးစတင်ခဲ့သည်။
၁၇ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး GF လိင်ဆက်ဆံမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာရံဖန်ရံခါ ED ရရှိခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်မတို့၌အတော်အတန်လျောက်ပတ်သောလိင်မှုဘ ၀ ရှိသည်။ ငါ ED ကိုငါ့နှစ် Porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ကျိန်းသေပြောလိမ့်မယ်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ငါဆက်သွယ်မှုလုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး
နှစ်အနည်းငယ်မြန်စွာရှေ့သို့ပြေးလိုက်ပါ။ ထိုဆက်ဆံရေးသည်ကျော်လွန်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအမျိုးသမီးအနည်းငယ်နှင့်အတူရှိနေသည်။ ကံမကောင်းစွာငါ့အဘို့ထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်သာမန် erectile function ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဟာသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုကိုသိပ်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်။ ငါလုံးဝမတတ်စွမ်းနိုင်ဘူး။ တက်နိုင်ရင်ငါ ၁၀၀% ဟာ ၂၁ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်သင့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကအရမ်းဆင်းရဲပြီးထွက်ခွာသွားတယ်။ ဆန္ဒရှိခံရဖို့အများကြီး။
porn / အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ငါ၏အ ED အကြားဆက်သွယ်မှုကိုအောင်ပြီးကတည်းကငါအောက်ပါပြုကြပြီ
၁။ ညစ်ညမ်းသော blockers ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဖုန်းပေါ်တွင်တပ်ပါ။ ဒါကရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒီစွဲလမ်းမှု၏ညစ်ညမ်းသောအပိုင်းကိုရိုက်နှက်ခြင်းအားဖြင့်အကြီးအကျယ်ကူညီခဲ့သည်ဟုငါပြောနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၃၆၅ ရက်အတွင်း ၅ ကြိမ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ဖူးသည်။
၂။ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပဲ။ ငါရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအဆုံးမဲ့ရက်သတ္တပတ်2ပတ်ကြာသံသရာထဲသို့ကျသွားသည်၊ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်နာလန်ထူ၊ အချိန်ပမာဏ x၊ အမြန်ပြန်စခြင်းစသည်ဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကြက်သွန်ဖြူကိုရှောင်နိုင်သည့်အရှည်ဆုံး IV သည် ၄ ​​ပတ်ခန့်ဖြစ်သည်။
ငါအတွက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ရန်သည်မလုံလောက်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စအလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းမှကျွန်ုပ်အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤစွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်တွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေပုံရသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်စာသားအရစွဲလမ်းမှုသည်သင့်အတွက်မည်မျှဆိုးကျိုးရှိသည်ကိုသိသော်လည်း၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်ခြင်းနှင့်ဤဒုစရိုက်အတွက်သူ့ကိုယ်သူမုန်းတီးခြင်းစသည်တို့သည်ပြန်လည်စွဲလမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ မှတ်ထားရမည်မှာအချိန်တစ်ဝက်တိုး။ မရှောင်ပါကကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတစ်ကြိမ်မှာ4လခန့်လိင် buddy ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်လိင်ကိစ္စမှသာလျှင်သုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်ငါ့ ED သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသည်၊ သဘာဝကျသည်၊ သင့် ဦး နှောက်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းပြသခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်မအလေးအနက်အရေးယူဖို့လိုအပ်ရှိရာအမှတ်ဤအခြေအနေနှင့်အတူတက်စာကျွေးစိုက်ပျိုးပါတယ်။ ငါဂျာနယ် join နှင့်စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ ငါသည်ဤအသိုင်းအဝုိင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ခံကိုကိုင်ထားချင်တယ်။
ငါကအောက်ပါ 365 နေ့ရက်ကာလအဘို့လိုက်နာငါ့အစွမ်းကုန်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ့်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလုပ်ဆောင်ချက်အောက်ပါအစီအစဉ်ကြံစည်ပါပြီ။
၃။ လိင်ဆိုင်ရာအတွေးများ၊ စိတ်ကူးယဉ်များ၊ အတွေးအမြင်များကိုပင်ကန့်သတ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။
၄။ အစပျိုးခြင်း (ကဖိန်း၊ အစာမှထွက်သောအစာ၊ ပေါင်းပင်၊ အရက်) အားလုံးကိုရှောင်ရှားရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ
၅။ ကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုသည့်လိင်မှုကိစ္စကိုမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်သာပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်ခံယူမှသာလျှင်
၃၆၅ ရက်ကအရမ်းကြာတာပဲ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၂ ပတ်တာကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ရိုးသားစွာကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပaိပက္ခများများစွာရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီး၎င်းသည်အမြဲတမ်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါသည်ငါ့ပြက္ခဒိန်ပေါ်မှာနေ့စဉ်ငါ၏အတိုးတက်မှုကိုခြေရာခံ, ဒီမှာအပေါ်နေ့စဉ်ဂျာနယ် entries တွေကိုရေးသားဖို့သွားနေပါတယ်။ ငါသည်ဤဖိုရမ်ကိုငါ့အိမ်မှာစာမကျြနှာကိုဖန်ဆင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ငါယခုနှစ်သင်တန်းကျော်ငါ၏အတိုးတက်မှုဝေမျှဖို့ငါ့အကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့သွားမယ်။ ထူးခြားတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှငါအနည်းငယ်အတှေး / စကားလုံးများကိုရေးလိုက်ပါမယ်တစ်နေ့တာသင်တန်းကိုကျော်ဖြစ်ပျက်ရင်တောင်။
အကယ်၍များ ငါပြန်သွားရင်ငါစီမံကိန်းကိုမစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲဒါဟာမူးယစ်ဆေးဝါးအလှည့်အပြောင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးအဲ့ဒီသန္ဓေတည်မှုအတိုင်းအတာအထိဆက်လက်မရပ်တန့်အောင်၊ သင်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း5ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလျှင်ပင်၎င်း၏တစ်ပတ်တာကာလအတွင်း5ကြိမ်ထက်သိသိသာသာပိုကောင်းတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါကဒီမှာပေါ်ရေးလိုက်အရာအားလုံးအမှန်တရားဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါထဝက်အူနဲ့ကျွန်မထို့နောက်ဤနေရာတွင်အပေါ်နေမကောင်း post ကို masturbate နဲ့ကျွန်မတက် fucked လို့ပြောပါ။ ဒီဖိုရမ်ရဲ့တာဝန်ခံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ရက် 1 ယနေ့နံနက်စတင်ခဲ့သည်။ အရမ်းရယ်ရတယ်သွားကြဖို့ 364 ပိုပြီး
ရွှေသွား - Odezur Reboot
ကောင်းပြီဒါပြန်ဤ reboot အရာမှာ။ ငါအမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်မျိုးဆက်၏ငယ်ရွယ်အထီးများအတွက်ပုံမှန်ပုံပြင်ငါတော်တော်များများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနောက်ခံတွေအများကြီးနှင့်အတူစတင်မည်မဟုတ်။ ကျွန်မအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၁၂ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်ကြားအမျိုးသမီးအတွင်းခံဘောင်းဘီကိုစကြည့်တော့သည်။ ၇ နှစ်ကျော်လောက်မှာတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုကြည့်နေမိသည်။ ငါတကယ်စဉ်းစားသောအခါစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှငါမပါ ၀ င်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ED သည်ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကြက်ကလေးများနှင့်အရက်မူးသောက်ရန်သတိပြုမိလာသည်။ ငါသာစုံတွဲတစ်တွဲနဲ့“ ကြာရှည်” ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ငါ့ရဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအများစုဟာတစ်ညမှသုံးနာရီလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါကအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ သို့သော်၊ အမှန်တကယ်သိသာထင်ရှားလာသည်နှင့်အမျှကွန်ဒုံးအတွက်ခက်ခဲစွာကြိုးစားရန်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ရသည့်အချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုမှန်တယ်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိရသောအခါ ငါ sh'bang တပြင်လုံးကိုပြု၏။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်တွေ့ရန်၊ ဘာမှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကိုရူးသွပ်တယ်လို့အမြဲတမ်းသိတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်တိုင်းအချိန်တိုင်းငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တယ်။ iPhone ကအဲဒါကိုအစွန်းရောက်အဆင့်အထိရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနောက်ဆုံးမှာ YBOP ကိုတွေ့ပြီးအားလုံးနှိပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုတူညီသောပြန်လည်ဖွင့်ထားသောအကောင့်များကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုနောက်တဖန်ဘယ်တော့မျှကြည့်ရှုရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၈ လကဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၈ လကကျွန်ုပ်ပထမအကြိမ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်တော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ငါရက်ပေါင်း 8-60 မှရတယ် (ငါ့ ဦး ခေါင်း၌သာခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်ငါအတိအကျအရေအတွက်ကရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး) ထို့နောက်ငါတက် fucked နှင့်ခက်ခဲပြန်ပြောပြ။ ဒါကကျွန်တော့်ကို iPhone ပေါ်ကညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်အထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့နှင်းခဲသွားစေတယ်။ ငါအရင်တုန်းကလိုညစ်ညမ်းတဲ့ဘ ၀ ထဲကိုဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လာတာမဟုတ်ပေမယ့် ၃-၄ ရက်တိုင်းမှာငါကြည့်နေခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်တော်နဲ့အတူ ၈ ကြိမ်ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီး ၁ ပတ်လောက်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ငါဘာမှားနေလဲမသိဘူး ကိုယ့်လိုချင်တာကိုမရပ်နိုင်ဘူး ငါတိုက်တွန်းမှုနဲ့ငါ့ ဦး နှောက်ဟာ“ ကောင်းပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲ” လို့သွားတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတစ်ယောက်ယောက်ကငါပိုင်ဆိုင်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ ငါအခုဘယ်လောက်ရူးသွားပြီလဲဆိုတာငါသိပြီ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာသိပြီး၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ ၂ ပတ်လုံးလုံးအဆင်မပြေဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၅၁ ရက်တွင်တစ်ကြိမ်တည်းသာပြန်ဖြစ်သည့်အခြေအနေရောက်နေသည်။ ငါ k2 ပိတ်ဆို့ခြင်းအပါအဝင်ကုန်သွယ်မှုလှည့်ကွက်တိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ တာဝန်ယူရမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲပါ။ ငါ့ညီလေးကဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့တာတစ်ခုတည်းသောအံ့dစရာကောင်းတဲ့လူပဲ။ ငါသူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာသူ့အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်မိအောင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လက်ရှိပြသနာကိုမကယ်တင်ချင်အောင်လုပ်တာပါပဲ။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏တာဝန်ခံမှုဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ အရမ်းကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်းမှကန့်သတ်ခံထားရသောအစားကျွန်ုပ်၏တွန်းအားများမှမယုံနိုင်လောက်အောင်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ငါ porn နှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ပါလျှင်နှင့်သူသည်သူ့ကိုချခွင့်ပြုခြင်းကနေငါအရှက်ကွဲအနည်းငယ်ငါ့ကိုတောင်မှကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်သူမြင်လိမ့်မည်ဟုငါသိ၏။ ကောင်းပါတယ်
ဒီတော့အခုငါ ၅၁ ရောက်နေပြီ။ ၂ ရက်အကြာမှာငါညစ်ညမ်းတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့တယ်၊ ငါကညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကြည့်တာနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်။ ငါနောက်တဖန် porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်တူသောဒါဟာခံစားရတယ်။ ငါအော်ဂဇင်နှင့်အရာအားလုံးနှင့်အတူနိုး။ နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော့်ဘဝမှာအဆိုးရွားဆုံးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ကျောင်းပြissuesနာများနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုများ၊ မြို့သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ရက်အနည်းငယ်မတိုင်မီအရက်သေစာသောက်စားခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအကြီးမားဆုံးသောအပိုင်းအစဟုခံစားမိစေရန်“ ညစ်ညမ်းသော” စိုစွတ်သောအိပ်မက်နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ၂ ရက်လောက်နေခဲ့ရတယ်၊ ငါဟာ ၄၅-၄၇ နေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးလှုံ့ဆော်ခံရတဲ့ကောင်လေးဆီကိုပြန်မလာသေးဘူး။ ငါတကယ်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့နဲ့ reboot တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံဖို့ဒီနေရာကိုဂျာနယ်တွေစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဤနေရာတွင်ရပ်ရွာလူထုအပေါ်တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအပိုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါအစပြုခဲ့ပြီ၊ လများစွာပြန်ရပြီ၊ ယခုငါထပ်မံကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအသစ်ကိုပြုလုပ်နေသောကြောင့်ဤအရာအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာအရကျွန်ုပ်သည် ၅၁ ရက် ၅၁ ရက်တွင်စတင်မလာခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခြင်းတို့ကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုပျော်ရွှင်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရပ်မှရေတွက်။ ကောင်းသောခံစားမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်သွားပါမည်။
- စိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အပြောင်းအလဲများ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်မှထွက်ရန်ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်ပြီးပျော်ရွှင်မိသည်။ ရာသီဥတုအလွန်ဆိုးရွားလာခြင်းကလည်း၎င်းကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ငါထွက်အလုပ်လုပ်, ငါလုပ်နိုင်သည်အတိုင်းအချိန်ဇယားအပေါ်သလောက်လုပ်နေတာခံစားရတယ်။
- စိုစွတ်သောအိပ်မက်သို့ ဦး တည်သည့်နေ့ရက်များနှင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်ရက်များ၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်နံနက်သစ်သား ၇၀ မှ ၈၀% အထိရှိသည်။ တခါတရံနံနက်သစ်သားသည်ငါ့ကိုနိုးထစေသည်၊ ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သွားပြီး flaccid ကိုနှိုးရန်သာဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေမိနစ်အနည်းငယ်လောက်လှည့်ပတ်နေတဲ့သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ရူပဗေဒနဲ့နိုးထပြီးသေသွားလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ငါလမ်းလျှောက်ဖို့ထတယ်ဆိုရင်။ ငါစိတ်ဓာတ်မကျဘူး ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးပြန်လည်စတင်ခြင်းကြိုးပမ်းမှုတွင်ရက်ပေါင်း ၆၀ မှ ၇၀ အတွင်းငါနိုးလာပြီးရေချိုးခန်းသို့သွားပြီးမှတ်မိနေသည့်အချိန်ကိုအမှတ်ရမိသည်။
- ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်းရှိသည်။ ဘဝမှာရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်တယ်၊ တခါတလေအဲဒီလိုကြောက်စရာကောင်းပေမယ့်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါရှိသည်မလုံခြုံမှုများစွာအသိအမှတ်ပြုရန်လာကြပြီ, ဒီ reboot မှတဆင့်ရယူကူညီပေးပါမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
-“ ညစ်ညမ်း” စိုစွတ်သောအိပ်မက်မတိုင်မီတွင်လူများနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံမိရန်ကျွန်ုပ်လွယ်ကူစွာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်လမ်းပေါ်မှာ, ဒါမှမဟုတ်အသစ်ကတစ်စုံတစ် ဦး ကိုတွေ့ဆုံ။ လူများကိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်ခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုယုံကြည်မှုများစွာပြသသည်။ လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကိုကြည့်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ၊ သင့်အနေနဲ့အရင်ကခက်ခဲတာတောင်မှလူတိုင်းကိုအကြံပေးလိုပါတယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်, ငါလူမှုရေးအခြေအနေများအတွက်ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်ခံစားမိကြောင်းသို့သော်ငါပြောပါလိမ့်မယ် ဒီသတိလစ်မိပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ကိုသိပ်ပြီးမထားခဲ့ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်
- မင်းကမိန်းကလေးတွေဆီကပိုအာရုံစူးစိုက်လာတာသေချာပေမယ့်ယုံကြည်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုတိုးလာတာကိုကြည့်လိုက်ရင်၊ အမျိုးသမီးများသည်ပုံစံအားလုံးအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိရန်ဆွဲဆောင်သည်။ သငျသညျတစည်းလုံးကိုပြောသောသူတစ် ဦး ယုံကြည်မှု Dude လျှင်သင်အမျိုးသမီးများသည်သင်ပြောသည့်အရာကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ မင်းကမင်းကိုသိပ်မပြောတတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းကိုဘာကိုနှိပ်တာလဲဆိုတာကိုမိန်းမတွေကစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းပစ္စည်းများကိုမည်သည့်ပစ္စည်းနှင့်မဆိုစမ်းသပ်ရန်မရှိသေးပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုမိုရနိုင်မည့် sexy အချိန်ကာလများတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သေချာသည်။
အဲဒါလိုက်တယ် ဒီနေ့နဲ့အတူရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါဟာ ED မရှိသလောက်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ တခြားရက်တွေမှာတော့ငါဟာခက်ခဲလွန်းတဲ့အတွက်ငါလွတ်လမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် Im သည်ယနေ့ညမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်။ ကြည့်မည်ဟုထင်ရပြီးကျွန်ုပ်သည် "porn" စိုစွတ်သောအိပ်မက်ထဲ မှနေ၍ အရှက်တကွဲဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါသူနှင့်ရင်းနှီးချစ်ခင်လာပါကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမည်။ ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါတိုးတက်မှုလုံလုံလောက်လောက်ရှိသလားဆိုတာကိုပြလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါလူတိုင်းအတွက်, ငါ 25 နှစ်အရွယ်အထီးဖြစ်ကြောင်းကို, ငါ ED နဲ့ငါ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြဿနာများကိုအဖြေတစ်ခုအွန်လိုင်းရှာဖွေရေးအတွက်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ site အပေါ်မှာသက်ရောက်ဖြစ်ပျက်။ ကျွန်ုပ်၏ဖိနပ်ထဲမှလူတစ် ဦး ၏ပြforနာများအတွက်အကြောင်းပြချက်များနှင့်ကုစားမှုများကိုရှာဖွေရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအင်တာနက်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်ဆောင်းပါးများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်အားနည်းခြင်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်သည် (တစ်ခါတစ်ရံဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အားနည်းချက်ကိုခေတ္တခဏရေးသားခြင်း) ။ နဗ်ကြောများမှယူဆောင်လာခဲ့သည့်နှစ်ဆယ့်နှစ်ဆယ်တွင်“ သင်စိတ်အေးသွားလျှင်ပျောက်သွားလိမ့်မည်” ဟုအတိအကျထောက်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆိုဒ်နှင့်ဤကဲ့သို့သောဆိုဒ်များ (YourBrainOnPorn.com) ကိုမတွေ့မှီတိုင်အောင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်နှင့်အလွန်နီးကပ်နေပုံရသောဖော်ပြချက်များ၊ သင်တို့အချို့ပြောတာတွေကိုဖတ်တာကစိတ်သက်သာရာရစေတယ်။ ယခုငါနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်အသက်အရွယ်၌ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအခြေခံကျသောကြိုးမဲ့တုန့်ပြန်မှုမှတဆင့် ED မှခံစားရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် (/ မျှော်လင့်ချက်) ကျွန်ုပ်ခံစားရသော်လည်းပြန်လည်နာလန်ထူရန်လမ်းကြောင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည့်ပို့စ်များသည်ခွဲဝေမှုနှင့်လူမှုရေးအထောက်အပံ့များကိုအထောက်အပံ့အဖြစ်အားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။ သူကပြောပါတယ်, ငါယခုအချိန်အထိငါ့အဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေဖို့, ငါမှန်ကန်တဲ့စိတ်ကူးရှိမရှိရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ ကတိသစ္စာပြုတောင်းခံရန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။
ငါပြောသလိုပဲငါဟာ ၂၅ နှစ်ပဲ။ ငါကျန်းမာတယ်၊ အလွန်ကောင်းတယ်၊ စီးကရက်မသောက်ဘူး၊ အပြေးသမားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးကောင်းမွန်သောလူမှုရေးဘ ၀ ရှိသည်၊ သို့သော်မကြာခဏ (ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည့်ပုံစံအပါအ ၀ င်) လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကတည်းကအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ပြုမူသောအခါငါစိုက်ထူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြdegreesနာများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် (၁၇) နှစ်အရွယ်မှာ“ ထ” နိုင်ခြင်းမရှိတာ (ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုမှာခါးပတ်အောက်ကလှုပ်ရှားမှုမှာပါ ၀ င်ခဲ့တာ) မဖြစ်နိုင်တာကိုသတိရမိတယ်။ အာရုံကြောနှင့်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ (ဥပမာ - မိန်းကလေးကကျွန်ုပ်၏နှိုးဆော်ခြင်းထက်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပူပန်မှုသည်ထုထည်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်) ။ ကျွန်ုပ်၏မလုံခြုံမှု၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ဤအဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိခြင်းနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းတို့ကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပါဝင်ပတ်သက်လာသည့်မိန်းကလေးတိုင်းနှင့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသည်။ မကြာခင်မှာပဲအဲဒါကိုကျွန်တော်လျစ်လျူရှုဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ - နှင့်သံသရာပျက်ကွက်ဆီသို့ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်။ အပျိုစင်ဖြစ်နေဆဲနှင့်“ ကျွန်းမှထွက်ခွာရန်” စိတ်ပူနေခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်၏မလုံခြုံမှုသည်ဤအတွေးများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံသောအခါငါ၌များစွာသောဒုက္ခရှိသော်လည်းစိတ်ရှည်။ ထောက်မပေးတတ်သောအတွေ့အကြုံရှိသောမိန်းကလေးနှင့်ကံကောင်းထောက်မစွာပင်။ ကျွန်းမှခေတ္တထွက်ခွာခြင်း၏အတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြေလျော့ပေးခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပူစရာမလိုခဲ့ပါ), သို့သော်ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေသောမိန်းကလေးတိုင်းနှင့်အဆင့်အတန်းအမျိုးမျိုးရှိသောပြproblemsနာများရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူခြင်းကိုမရရှိနိုင်သို့မဟုတ်မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်အမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများကိုမကြာခဏရှောင်ရှားလေ့ရှိသည်။ ငါမလုပ်နိုင်သေးဘူး၊ ဒီအကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနိုင်ဘူး အွန်လိုင်းမှသတ်မှတ်ထားသောကုစားမှုများအားလုံး -“ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်?” ငါဆေးလိပ်မသောက်ဘူး “ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလား” ငါလုပ်တယ် “ စိတ်မပူပါနဲ့လား” အိုကေ၊ ဒါကတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါထင်တာကနှစ်နဲ့ချီပြီးပြwasနာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာကလုပ်တာထက်ပိုလွယ်တယ်။ ဒါ့အပြင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကနှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့ကျန်းမာတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုအချိန်တိုင်းနီးပါးမထနိုင်အောင်တားဆီးပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ သို့သော်ထို့နောက်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမီးသီးစတင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါစိုးရိမ်စိတ်ပြproblemနာရှိလုပ်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းငါပိုပြီးထွက် chilling ဖို့လိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါက porn နဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုရနိုင်တယ်လို့ရုတ်တရက်သိလိုက်ရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်နှင့်ငယ်သောအမျိုးသားအများစုနည်းတူကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စမလုပ်မီ၊ ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် (တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်၌လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း) ကိုအစပြုခြင်း၊ လိင်မှုနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်အလွယ်တကူရရှိနိုင်။ အရှက်ကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်လိင်အပျော်အပါးအတွက်လိုအပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါဘာမှမမှားဘူး၊ ဘာမှမကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး။ လိင်စိတ်အရင်းအမြစ်တွေ (မင်းရဲ့လိင်စိတ်နိုးထမှု၊ မလုံခြုံမှု၊ စိုးရိမ်မှုတွေကိုငါဖြေလျှော့ပေးတဲ့သူတွေကတော့) အမြဲတမ်းကြီးကျယ်ပြီးကျန်းမာတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံသူတွေကညစ်ညမ်းတဲ့စွမ်းအားကိုအမှန်တကယ်နားမလည်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ် ငါနှစ်ပေါင်းများစွာနီးပါးနေ့တိုင်းကြည့်, ငါသုံးရက်အဘို့အမပါဘဲသွားလျှင်, ငါကအောင်မြင်မှုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ငါလိင်မဆက်ဆံခင် ၇ နှစ်ကြာအောင်လိင်အကျင့်စရိုက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် "လိင် ဦး နှောက်" သည်ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ရန်၊ လိင်ကိုပုဂ္ဂလိကနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောအတွေ့အကြုံအဖြစ်ရှုမြင်ရန်နှင့်မည်သည့်အတွေ့အကြုံမှရှောင်ရှားရန်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်လာသည်ဟုယူဆရမည်။ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လည်းရှိသည် (အင်တာနက်အပြာဖြင့်အော့တ်လုပ်ခြင်းလုပ်ရပ်ဖြင့်သင်၏မိခင်ကသင့်အားဖမ်းမိသည်ဟုပြောခြင်း) ။ ငါခံစားမိနိုင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စိုက်ထူဖို့ငါငါ့အကြိုက်ဆုံးအရုပ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့၊ မကြာခဏကြုံတွေ့ရတာကနေလွတ်မြောက်ဖို့၊ အနားယူဖို့နဲ့ကြည့်ရတာအတွေ့အကြုံကိုကြိုးစားကြိုးစားဖို့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ငါ့ကိုရှေ့မှောက်၌ကအားလုံးကို။ ငါရောထွေးသလိုခံစားရတယ် - ငါ့စိတ်က jigsaw ပဟေpieceိဆန်ဆန်အပိုင်းအစတစ်ခုလိုပဲသူမနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အာကာသထဲကိုထိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားနေသလိုပဲ။ ED နဲ့ porn အကြောင်းအွန်လိုင်းစာပေတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်များပြားတဲ့အမှိုက်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ငါဒီ site ကိုပို့လိုက်တယ်။
ဒီဆိုက်နှင့်၎င်းကဲ့သို့သောဆိုဒ်များကို အခြေခံ၍ ကုသနည်းသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုနှစ်လအထိရှောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါခရီးစတင်ခဲ့ပြီ ငါသုံးပတ်လောက်မှာ porn ကိုကြည့်ကြပြီမဟုတ်နှင့်နှစ်ခုနီးပါးအတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေကြပြီမဟုတ်။ ငါအစွန်းရောက်တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့သွားသည် (အိုး၊ ဒါလွယ်ကူတယ်၊ အို၊ ကျွန်ုပ်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ ??) အလွန်လျှင်မြန်စွာဖြစ်သော်လည်းယခုအထိကျွန်ုပ်သည်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံရပြီးလုပ်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့အဓိကစိုးရိမ်မှုကအလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ porn သည်အဓိကပြisn'tနာမဟုတ်ပါ။ ငါဘာမှခြားနားချက်မရှိဘူးဆိုတာသိထားလို့အဲဒါကိုပိုပြီးလွယ်ကူသွားစေတယ်။ ငါလိင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ED ခံစားခဲ့ရတယ်။ လိင်ကိစ္စမစခင်ကတည်းကငါ porn ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ အစဉ်အမြဲငါ porn ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှမတိုင်မီငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, သူတို့မတည်ရှိပါဘူး။ ဒါကပြtheနာလို့ထင်ရပေမဲ့၊ အဲဒါကအဓိကပြisn'tနာမဟုတ်ပါ၊ ငါ porn ကိုစွဲလမ်းတော့မှာမဟုတ်ပေမယ့်လည်းအလားတူပြissuesနာမျိုးကိုငါမျှော်လင့်နိုင်သေးတယ်။ အောက်ခြေရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ပြtheနာကတကယ်ပဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ *** စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ကျွန်ုပ်အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့ရတိုင်းနီးပါးဘေးဒဏ်ကျရောက်စေရန်မျှော်လင့်နိုင်သည့်ပြforနာတစ်ခုအတွက်ယုတ္တိရှိသည့်ရောဂါလက္ခဏာလား။ *** ငါ ED မှလွတ်မြောက်ချင်သည် (အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရ၊ အပြာရောင်လတွင်လူတိုင်းကြုံတွေ့ရသောပြtroublနာများသည်ကျွန်ုပ်သိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်ကုသဖို့လိုသမျှကိုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆန္ဒရှိသည်။ ငါ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ငါပုံမှန်ပြေးနေတယ်၊ ​​ငါကောင်းကောင်းစားတယ်၊ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုငါရှောင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။
ဒါ့အပြင်ငါကထောက်ခံမှုစကားလုံးတစ်လုံးလိုတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံးပြောပြီးပြီးတဲ့အခါမှာလိင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ငါဘဝကိုပြန်လိုချင်တယ်၊ ငါလိင်ကအပျော်အပါးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်၊ ငါဟာအဲဒါကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်နိုင်လို့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမရှိပါဘူး၊ ငါလိင်သည်ကြောက်လန့်ခြင်း၊ ဒါအဆင်ပြေမလား ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်လား ငါဒီလိုအခက်အခဲတွေကသာမန်အားဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှမဟုတ်ဘဲပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ငါထင်သလား။
စာဖတ်ခြင်းအဘို့နှင့်သင်၏အကူအညီအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ post ရဲ့အရှည်အဘို့အစိတ်မကောင်းပါ, သို့သော်ငါသည်ငါ့တပြင်လုံးကိုအတှေ့အကွုံကိုဖြတ်ပြီးရတဲ့၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ကအားလုံးကိုထုတ်ရဖို့လိုတယျ။
အင်ပါယာ၏ဘုန်းအသရေအတွက်ပြန်လည်စတင် - နေ့ 1/90
ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ နှစ်အရွယ်ဗြိတိသျှကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကဘာလင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးထိုတွင်ရုံးခန်းတွင်ကျွန်ုပ်ကိုရာထူးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ညှိနှိုင်းနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်မြို့ကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်ကထက်ထက်သန်သန်လုပ်ခဲ့ဖူးသူပါ၊ ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ YBOP ကိုရှာပြီးအပိုင်းပိုင်းတွေပြိုကျသွားတယ်။
အခုတော့ ပို. ပို. bothersome ဖြစ်လာကြပြီငါ့ပြဿနာများ:
လူမျိုး၏ * ကြောက်လန့်
willpower, Drive နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ * ကင်းမဲ့ခြင်း
* ကျွန်ုပ်၏အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ရှောက်။ အလုပ်မှအပအခြားအလုပ်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကမျှဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအဘယ်ကြောင့်မခံစားနိုင်ပါသနည်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ပြtroubleနာများ၊
ရက် ၉၀ ပြန်ဖွင့်သည်ငါ့အတွက်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင် ...
ကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နေရာတစ်နေရာလိုချင်သော်လည်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကဒီမှာ post ချင်လျှင်, ထိုအဆင်ပြေလျှင်မပါလျှင်, ထိုလည်းအရမ်းအေး (သင်နေဆဲကောင်လေးတစ်ယောက်) ။
မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေကျွန်မမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်နည်းပညာသတင်း website တွင်စတင်လင့်များတစ်ကွင်းဆက်မှတဆင့်ဤအရပ်ဌာနကိုတွေ့သော်လည်း, ယခုငါကဒီမှာပေါ့ခြင်းနှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖတ်နေအကြောင်း, ဒါကြောင့်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုမှဖြစ်ပျက်နေသည်ပဲမဟုတျကွောငျးကိုသိရန်ဒါကောင်းသောခံစားရ ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်။ ငါယခုအကြောင်းကို 18 နှစ်ပေါင်း PMO ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်, နောက်နှစ်ကောလိပ်သွား,5မိပါတယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ခဲ့ပေမယ့်အတိတ်နှစျတှငျဒါဟာပိုပြီးမကြာခဏတစ်ခုလုံးအများကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 1.5 ကြိမ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျမ်းမျှနေ့စဉ်နေ့တိုင်း P ကို ​​/ M / အို2ရောက်ရှိပါလိမ့်မည်။ ငါမျိုးရှိသမျှတို့သည်ယခုပြီးတော့ကအားရစရာပါစေနဲ့သလောက်ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ဝေးကှာသှားဖို့ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ်။ ငါတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့, ကိုယ့်မျိုးမူးရူးပြုကြသည့်အခါတိုင်းသို့သော်လည်းငါသည်ရှာပါ။
“ **********” - ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေသည်သင်၏အခြေအနေနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ကျောင်းအလုပ်နှင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများသည်ကွာဟချက်ကိုကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သို့သော်ငါကျောင်းပြီးသည့်အခါအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ P ၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောလုပ်စရာတစ်ခုမျှသာရှိသည်။ ဒီမှာပဲငါ့ကိုယ်ပိုင်အခန်း၊ လက်တော့ / အင်တာနက်။ ငါ့ကိုတားဆီးတာဘာမှမရှိဘူး။ ငါကျောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုပြီးပေါင်းသင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအများကြီးကူညီလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်မထားဘူး။ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ရန်ရှိသည်အခမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ငါတစ်ခုတည်းသောလိင်ကျောင်းသို့သွားသောကြောင့်မည်သည့်မိန်းကလေးနှင့်မှပေါင်းသင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါမြို့ငယ်တစ်မြို့မှာနေထိုင်; ငါ့အသက်အရွယ်ကလူများအတွက်ညဉ့်ဘဝတစ်လမ်းအတွက်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ငါဆက်ပြီးအပျိုစင်ဖြစ်နေတုန်းပဲ ဘယ်အချိန်မှာငါဆုံးရှုံးချင်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။
“ ************” - မင်းကငယ်ငယ်တုန်းကမင်းအစာအိမ်ကိုလိမ်ပြီးကြမ်းပြင်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျခဲ့တယ်လို့မင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်လည်းလုပ်ခဲ့တာကိုငါဖတ်တဲ့အခါငါကငရဲကိုကြောက်တယ်။ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှအဲဒီလိုလုပ်ပုံမရဘူး၊ တခြားနည်းလမ်းလည်းမလုပ်ဘူး။ အဲဒါကငါအမြဲတမ်းတွေးမိနေတဲ့ပြaနာပါ။
ငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူရှားပါးဖြစ်ကြတော့ဘူးနံနက်ဘုန်းအသရေမရကြဘူး။ ငါ IMP ငါသူတို့ပူနေပြောပြနိုင်သော်လည်း, ငါမြင်မိန်းကလေးငယ်များအားဖြင့်ဖွင့်ခံရမပေးရှာပါ။ ငါနောက်ဆုံးအချိန်ထားတဲ့ IM တစ်ခုစိုက်ထူကိုင်နိုင်, ငါအာရုံရပေမယ့်အိုတကယ်တကယ်ကတစ်ချိန်ကပြုသကဲ့သို့အဖြစ်ကောင်းသောခံစားရပါဘူး။ ငါငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေရဲ့စဉ်းစား, ငါ Dopamine အကြောင်းကိုအချို့သောဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုခြင်းခံခဲ့ရပြီးပြီ, နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် system ကို Over-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးဖြစ်ခြင်း။ ဒီတော့ 8 ပတ် P ကို ​​/ M / အိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကြောင့်လည်းမရှိသနည်း ငါဂုဏ်နတစ်ဦးသွားလာရင်းကြောင်းပေးမိပါတယ်။ အခုလုပ်နေတာလူတိုင်းကံကောင်းပါစေ!
ငါသည်လည်း Porn Masturbation ကိုစွဲလမ်းနေပြီးအနည်းဆုံး ၁၅ နှစ်အရွယ်မှဖြစ်သည်။ ငါအသက် ၁၃ နှစ်မှာစခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်အသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီ။ တစ်ကိုယ်ရေနေပြီး ED ရောဂါခံစားနေရဆဲ - ငါဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းသည်ကျွန်ုပ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သမျှနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းတွေ့ရှိပြီးမျှဝေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ abstinence“ မှတ်တမ်း” သည်လွန်ခဲ့သော ၂၁ နှစ်အတွင်း ၁၀ ရက်အကြာတွင်အော်ဂဇင်မပါဘဲဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ရေးသားခဲ့သည်သမျှသောယောက်ျားတွေရန်: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့နှလုံး၏အောက်ခြေကနေ, သင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ငါနှစ်သက်သောစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ခဲယဉ်းသောအချိန်ကိုမမှတ်မိပါ။ တစ်ခါတလေအဲဒါကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိတယ်၊ အဲဒါကတခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ မိုက်မဲသောမာနထောင်လွှား။
ငါနှင့်အတူရငျးနှီးရငျးနှီးရငျးနှီးရမညျ့အမြိုးသမီးမြားသညျငါနှငျ့အတူရှိသညျ့အခြိနျကိုမကြှမျးကငျြဘဲဖွစျနိုငျကွောငျးပွောခဲ့သညျ။ ငါသူမကိုပျော်မွေ့အောင်လုပ်တာသေချာအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့ ED ဟာငါကိုယ်တိုင်သာမကဘယ်သူ့ကိုမှပြanနာမဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်းပေါ်လာခဲ့ပေမယ့်ငါဆင်ခြေပေးခဲ့တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာငါဒီ post ကိုဖတ်သည်တိုင်အောင်။ အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
ငါအိပ်ရာပေါ်မှာမကောင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာငါထက်ပိုပြီးအော်ဂဇင်များစွာရှိခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုပျော်မွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါဟာအကြီးအကဲကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ဖက်တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အော်ဂဇင်ကိုကျွန်မတွေ့ခဲသည်။ သူမကူညီနေစဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရုံသာလျှင်အော်ဂဇင်ကိုသာရနိုင်သည်။
ငါမကြာသေးမီကရက်ရက်ရောရောထွက်သွားသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်ထားငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်အခါတိုင်းလွယ်ကူသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ကြဖို့မအတွေးများရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလွန်ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်အားပြင်းသောအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိသည့်အချိန်၏ ၉၀% ကျော်၊ အထူးသဖြင့်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်အကြာစောင့်ဆိုင်းလျှင်ဖြစ်သည်။ ယခုမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်သည်မာနကြီးခြင်းနှင့်ဘာမှမျှော်လင့်စရာလုံးဝမရှိကြောင်းနားလည်လာသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြည့်တန်ဆာသို့သွားခဲ့သည်။ ငါသူမတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့်မျှော်လင့်ထားသလိုကျွန်တော်ဟာအော်ဂဇင်ကိုမပြုခဲ့ဘူး၊ သူမကဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူးလို့ပြောပြီးဆရာ ၀ န်နဲ့တွေ့ဖို့ပြောတယ်။ ငါကတော့သူမလုပ်ခဲ့တာတွေထက်သူ့ကိုနမ်းပြီးနမ်းတာကိုနှစ်သက်တယ်။ အနမ်း၊ “ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းအတွေ့အကြုံ” သည်ကျွန်ုပ်အများဆုံးပျောက်ဆုံးနေသည်။ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ ဒီအတွက်ငါ P / M ကိုစွန့်လွှတ်ချင်တယ်။ ငါလုပ်မယ်လားမသိဘူး ၂၁ နှစ်တာရှည်လွန်းပြီးဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲလုပ်ခြင်းကအကူအညီမပေးနိုင်ဘူး။
ငါကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ပိုကောင်းဘို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကိုချစ်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အခြားဒေသများတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်သေချာစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒီအရာအားလုံးကိုငါအာရုံစိုက်မယ်။ အိုး၊ ငါကိုယ်တိုင်အပြင်ပန်းဝါသနာပါရာတွေရှာရမယ်။ လူတွေကိုပိုကြည့်ပြီးပေါင်းသင်းပါ။ ငါပြောရုံသာမကလုပ်လည်းမရမျှော်လင့်ပါတယ် အိမ်မှာတည်းခိုတာကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိလိမ့်မယ်။ လှည်းလဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီမယ့်သူငယ်ချင်းကိုစာရင်းပေးမယ်။ ငါပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အလေ့အထ Kickin '
အရှည်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်မကောင်းတာဝန်နောက်ခံဇာတ်လမ်း, ဒါပေမယ့်ငါနည်းနည်းဒေါသထွက်ဖို့လိုအပ်:
ငါ 20 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ပြီးခဲ့သည့် 8 နှစ်ပေါင်း masturbating ပါပြီ။ ပထမဦးဆုံးမှာဖြစ်စေခဲ့သည်ဘယ်အရာကိုလုံးဝသေချာမသိပေမယ့်ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းတစ်ဝှမ်းရှင်းပြီသည်အထိငါအစွန်းရောက်ဖို့လုပ်နေတာမခံခဲ့ရသေချာဖြစ်၏။ အထက်တန်းကျောင်းစဉ်အတွင်းငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့စတင်, ဒါကြောင့်ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မကြိုတင်က porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပေမယ့်မိသားစုကွန်ပျူတာခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုသာရခဲပြုလေ၏, ကောင်းစွာ, မိသားစုကွန်ပျူတာနှင့်ကျွန်မအပေါ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏မိဘများထွက်ရှာတွေ့တဲ့စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာငါကပိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုစတင်ခဲ့ပေမယ့်ငါ (ယခုငါသိပါ) ငါတပြင်လုံးကိုလွှင့်အရာသို့အရငျမတတျနိုငျဒါသိပ်ကိုကင်လုပ်ခိုင်းအင်တာနက်ရှိခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသူသည်ငါအနည်းငယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဗီဒီယိုများမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ကြောင်းကဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသညျ။ ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်း၏အဆုံးအားဖြင့် (ရိုးသားဖို့ဘယ်လောက်မကြာခဏတကယ်သေချာမပါ) ဖြစ်ကောင်းနေ့စဉ် masturbating စတင်ခဲ့ပြီးတကယ်ကိုကျွန်မငြင်းပယ်ခံရ့လွင်ပြင်ဟောင်းစိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ဆင်းရေးသားခဲ့သည်ထားတဲ့မိန်းမနှင့်မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်, မရှိခဲ့ဘူး, ကျနော်သေချာဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ခုခု ငါတို့ရှိသမျှသည်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါကောလိပ်စတင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အတွက်ကောလိပ်ဟာကမ္ဘာသစ်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးဆိုလိုတာကသိပ်ရှက်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်လိုပေါ့။ ငါအခန်းထဲမှာအခန်းဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ စာကြည့်တိုက်မှာမကြာခဏလေ့လာနေတဲ့အဲဒီတုန်းကငါ့အလိုအလျောက်ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့တယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလျှင်တစ်ကြိမ် ၄ ကြိမ်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၌အချိန်ရှိခဲ့သည်။ ဒါကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုနဲ့လိင်စိတ်ကိုအပြာစာပေရုပ်ပုံများနဲ့အစားထိုးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ၂.၅ နှစ်တာကာလတလျှောက်လုံးတွင်တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြစ်ခဲ့ပြီးမိန်းကလေးတစ် ဦး တည်းနှင့်သာပေါင်းသင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍“ ဇီဇာကြောင်ခြင်း” ဖြစ်ခြင်းအထိမျိုချခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ဆိုးများတိုးလာသည်။ အတန်းများအကြားတစ်နာရီကွာခြားမှုရှိခဲ့ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အဆောင်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်မရှိသလောက်ဖြစ်လာသည်။ အိပ်ရာမ ၀ င်လျှင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အခြားဘာမျှမသွားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အားလပ်ချိန်များအတွက်သွားသည့်အခါအထူးသဖြင့်ဆိုးရွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကောလိပ်တွင်အစောပိုင်းအချိန်ဇယားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အိမ်ပြန်ရောက်လျှင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်အများစုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ပူပြင်းသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုတွေ့မြင်ခြင်း၊ ဘရောင်ဇာတစ်ခုဖွင့်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့လျှင် ၆ ကြိမ်လောက်ဖြစ်တတ်ပြီးထိုနေ့မကုန်မီပင်အဆုံးသတ်အထိရောက်သည်။ အားလုံးအပျော်အပါးပါဝင်ပတ်သက်, နည်းစနစ်လုပ်ဆောင်ချက်ဖျော်ဖြေဖို့ပဲတိုက်တွန်း။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သန္ဓေတည်ခြင်း, သတိပေးအချက်ပြမှုများကိုအမြိုးမြိုးသောအထဲကပေးပို့ခဲ့ကြသင့်ပေမယ့်ငါတကယ်သူတို့ကိုရှာမခံခဲ့ရသောအရာတစ်ခုခုကိုလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးစစ်မှန်သောလိင်မှုအတွေ့အကြုံသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ၊ ပါတီပွဲတစ်ခုမှာဒီမိန်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ ငါတို့ချိတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူမအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ သူမသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရန် (ကျွန်ုပ်နှင့်အဆင်ပြေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့်အပျိုစင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိခြင်း / ရှက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်) နှင့်အိပ်ခန်းထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့အဝတ်အစားမပါဘဲကုန်ဆုံးသွားပြီးသူမကျွန်တော့်ကိုသွားချင်လားလို့မေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမကအဲဒီညမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ သူမကငါ့ကိုလက်ဆွဲစကားပြောပြခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့အတွက်တကယ်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူမသည်သူမ၏လက်ချောင်းများကိုပါးစပ်ဖြင့်စိုစွတ်ပြီးအနည်းငယ်နည်းနည်းလေးထိုးပါကစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသက်သာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ခြောက်သွေ့လာပြီးမသက်မသာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ငါ (သူမခေါင်းထဲ) ကိုသူမမှာတကယ်ကောင်းမွန်သည်ဟုမထင်ပါ။ သို့သော်သူမက“ Deathgrip” ကိုငါအသုံးမပြုခဲ့သောကြောင့်ယခုငါနားလည်သဘောပေါက်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကိုရက်အနည်းငယ်ကြာလည်ပတ်ရန်သွားခဲ့သည်၊ ပထမနှစ်ရက်မှာကျွန်မတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်း ခဲ့၍ ကျွန်မတို့အတူတူအခန်းတစ်ခန်းတည်း၌အိပ်နေသောကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်နေထိုင်စဉ် (၅ ရက်) တွင်နံနက်သစ်သားရနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ မှတ်မိနိုင်စွမ်းထက် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သည်။ ငါပြန်လာသည့်နေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးနှင့်အခြားရက်စွဲတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ထိုမနက်တွင်ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်နေ့စွဲ / ထိုညတွင်ကျွန်ုပ်သွားသောအခါဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခဲ့သည်။ ငါတစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့ငါနှစ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ထိုညတွင်သူမအနေဖြင့် lube အချို့ထုတ်ယူခဲ့သည်။ ငါချောဆီကိုတောင်မှအလင်းရောင်ဖြင့်ရိုက်ခြင်းသည်အလုပ်မပြီးကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ငါ (လိင်တံကိုလက်သီးဆုပ်ကိုင်ထားသကဲ့သို့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ထားသည့်) မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသူမကိုပြသခဲ့သည်။
ငါကျောင်းပြန်ဆင်းလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတော်အတန်ခံစားခဲ့ရတယ်၊ တစ်ချိန်ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထဲသို့အမြန်ပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ သင်၏အခန်းနှင့်အဆက်အသွယ်မြင့်မားသောအင်တာနက်ရှိခြင်း (ငါပြီးခဲ့သည့်စာသင်နှစ်တစ်ဝက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင်နေခဲ့ပြီးပြီ) ကျွန်ုပ်၏စနစ်အတွင်းသို့ရောက်သွားသည်။ ငါမဟုတ်ဘဲပတ်ပတ်လည်ထိုင်ခြင်းနှင့်အစားဗီဒီယိုဂိမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကစားချင်သောကြောင့်, လူမှုရေးအရထွက်သွားရန်ဖိတ်ကြားချက်ကိုပယ်ချလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ငါနောက်ထပ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူမကို Sally ဟုခေါ်သည်။ Sally ကကျွန်တော့်ခြေထောက်ကိုလှမ်းခေါက်လိုက်တယ်။ ကျူရှင်အုပ်စုတစ်ခုမှာတွေ့တယ်၊ အဲဒီမှာနည်းနည်းပရောပရည်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ FB / texting ကိုလုပ်တယ်။ သူမဟာသေခြင်းတရားကိုပြုတ်ကျသွားစေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူမငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ နောက်တော့ငါသူမကိုမေးခဲ့ပြီးဟုတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။ ညစာစားဖို့ထွက်သွားတော့သူမကကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကိုပြန်လာတယ်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ခုံပေါ်မှာစတင်ထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့ကအဲ့တာလောက်ဝေးသွားတယ်။ နောက် ၄ ရက်အကြာမှာနောက်ရက်စွဲတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကနည်းနည်းဝေးလံတယ်။ ကျနော်တို့အိပ်ရာပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ပြန်အိပ်ခန်းငါ၏အအိပ်ခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့, အဘယ်မှာရှိအဝတ်ထွက်လာနှင့်ကျွန်တော်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားချွတ်။ သူမကကျွန်တော့်အပေါ်သို့ဆင်းလာသည်။ ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမခံစားရကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါဆိုလိုတာကသူမကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအခြားမိန်းကလေးထက်အနည်းငယ်ပိုပါတယ်။ သူမဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသိပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မခံစားရပုံရသည်။ ငါ4မိနစ်ခန့်အတွက်လာ။ , ကအရမ်းကောင်းသောခံစားခဲ့ရပေမယ့်အရင်ကကဲ့သို့မကောင်း။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ငါအဲဒီနေ့ ၁၂ ကြိမ်လောက်မတိုင်ခင်နှစ်ရက်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ် ကျနော်တို့နောက်တစ်ရက်စီစဉ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်၊ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ငါတို့အရင်ကထက်နည်းနည်းဝေးတော့မယ်လို့အရိပ်အမြွက်ပြောတယ်။
သူမသည်ပြီးခဲ့သည့်အချိန်ထပ်, ကျော်လာ၏။ ကျနော်တို့အိပ်ရာပေါ်ထွက်လုပ်။ , ငါ့အခန်းကိုပြန်သွား။ တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအပေါ်သွားလေ၏။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ငါဟာတူညီတဲ့ကောင်းပေမယ့်သိပ်ပြီးမခံစားခဲ့ရဘူး။ (ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအကြိမ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပြန်အမှတ်ရမိတယ်။ ဒါကကျွန်မကိုစိတ်ပူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းဟာအတော်အတန်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိသေးဘူး) ပြီးတော့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာသွားသောက်ခဲ့တယ်။ သို့မဟုတ်တစ်နာရီ၏သင်တန်းကျော်နှစ်ခုပြန်လည်ငါ့တိုက်ခန်းသို့ခေါင်းနှစ်လုံး။ ကြိုတင်နိမိတ်အနည်းငယ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်၊ သူမအပေါ်သို့ဆင်းလိုက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံချင်သလားဟုသူမမေးမြန်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ကအပျိုစင်ဘ ၀ ကိုကွန်ြတော်ကွန်ဒုံးဘယ်မှာလဲလို့မေးတယ်။ သူမသည်သူမအပေါ်ထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်မခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အ ၀ တိုးချဲ့ပြီးအနည်းငယ်မာကျောသော်လည်းထိုးဖောက်အောင်မြင်ရန်လုံလောက်မှုမရှိ။ ကွန်ဒုံးပြတ်သွားတယ်၊ သူမငါ့ကိုပါးစပ်နဲ့စစစစော်ကားခဲ့ပေမယ့်ငါ့ကိုအပြည့်အ ၀ စိုက်ထူဖို့မလုံလောက်ခဲ့ဘူး။ နောက်ထပ်ကွန်ဒုံးတစ်ခုဆက်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ဘဲသူမအားပါးစပ်ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် ငါသေပြီဟုပြောရန်မလိုပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသော်သူမသည် ၁၀၀ ရာနှုန်းမှာသူမ၏အမှားမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းအားစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်နှင့်သူမကကျွန်ုပ်ကိုအစောပိုင်းကရရှိခဲ့သောအချက်အလက်များအဖြစ်ရေးသားခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်ခင်းတွင်သူမအလုပ်လုပ်နေစဉ်ထွက်ခွာသွားပြီးကျွန်ုပ်အိပ်ရာထဲလဲလျောင်းရင်းဘာကြောင့်ဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သွားရသနည်း။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထုတ်ပစ်ကာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါကဲ့သို့သောအပြည့်အဝမရရှိနိုင်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ငါမတိုင်မီညကရှိခဲ့သောအော်ဂဇင်များစွာနှင့်ဆက်စပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပူစေခဲ့သည်။ ဒါနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအကြောင်းငါပြောနိုင်မယ့်အလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်ဘဝမှဖြတ်တောက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့ပြီးသူမထပ်မံစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအလင်းဖြင့်ပို့ပေးမည့်ဆောင်းပါးအားလုံးကိုဖတ်နေပြီးနောက်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်သွင်ပြင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ငါကိုယ်တိုင်ယေရှုပြောနိုင်တာပဲ။ အထူးသဖြင့် windows / switching edging များသည်စိတ်ကူးယဉ်အဟောင်းနှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုတည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်သောအော်ဂဇင်ဖြစ်စေသည့်အပြင်“ ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံ” အသစ်သည်လျင်မြန်စွာအခြားပုံတစ်ပုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်။ ငါဒီမိန်းကလေးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ဒီဆက်ဆံရေးကိုအလုပ်မလုပ်စေလိုတဲ့အတွက်ဒါကငါ့ကိုလုံးဝမကြောက်ဘူး ငါ Hard drive ရှိအရာအားလုံးကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိုက်တယ်၊ ငါမကြာခဏသွားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်လိုက်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်လွန်ခဲ့သော ၇ ရက်ကစတင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးရက်အနည်းငယ်မှာအလွန်လွယ်ကူပြီး“ Sally” သည်ထိုရက်သတ္တပတ်တွင်အလွန်အလုပ်များခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်နေ့လည်စာစားနိုင်ကြသည်။ ငါသူမ၏အကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်အတော်လေးနည်းနည်းစတင်ခဲ့ပြီး, တတိယသုံးရက်အကြာမှာအတော်လေးအားကောင်းတဲ့စိုက်ထူခြင်းဆီသို့ ဦး တည်ခြင်းနှင့်ယခုတိုင်အောင်တက်ဆက်လက်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းလောင်စာတွေမဟုတ်ဘဲစားပွဲပေါ်၊ ပေါင်အမျိုးအစားစိတ်ကူးတွေကိုကွေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သူ့ကိုနမ်းတာနဲ့တူတာတွေကိုမှတ်မိဖို့တော့လိုတာပေါ့။ ငါဒီနေရာမှာဖတ်ခဲ့တဲ့တခြားပုံပြင်တွေနဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားတယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ ငါတကယ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသို့မဟုတ်ဒီတော့များအတွက် "Hardcore" ကနေဝေးပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာတွေ့ရတဲ့ကြမ်းတမ်းသောလိင်များကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်စားခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုမရခဲ့ပါ။ X အနုပညာအမျိုးအစားနှေးကွေးသောပျော့ပျောင်းသောအာရုံခံကိရိယာများကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါစိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မျက်မှောင်ကြုတ်ခြင်းခံရကြောင်းဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အသက်အရွယ်ရှိသင့်သည့်အားကြီးသောယောက်ျားလေးများသည်ကျန်းမာသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းတို့သည် (ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၈ ရက်ပါ၊ ကလေးဘ ၀ ခက်ခဲနေသည်။ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်) တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးချစ်တာဖြစ်လို့အရမ်းခံစားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရမ်းပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆက်စဉ်းစားတိုင်းငါအဲဒီညမှာဘယ်လောက်ရှက်ရလဲ၊ ငါ porn ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချက်အနည်းငယ်ခံစားခဲ့ရပေမယ့်ငါဒီတစ်ချိန်က frame ကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်ပြန်သွားလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။
23 နှင့်လိင်အသစ်, အဆိုးဆုံးအရာငါ ED နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံမှုသို့သွား။ မသိခဲ့ပါ။ ယခုငါအသစ်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ပါပဲ, ကျိန်ဆိုမှုအတူတူပင်ပြproblemsနာများ, ငါ့အင်တာနက်ကို porn အလွန်အကျွံ fapping ၏ 10yrs ရှာဖွေတွေ့ရှိလာ ငါ့ ED (ဒီမနက်အစောပိုင်းကဒီထွက်တွေ့ရှိခဲ့) ။ ဒါကြောင့် 2day က porn နဲ့ fapping ကိုစိန်ခေါ်ဖို့စတင်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့ ဦး နှောက်က reboot လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူမရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းလိင်ကိုပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့တယ်။
ငရဲမှပရဒိသုသို့ - သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသောလမ်းကိုကြမ်းတမ်းသောလမ်း (၂၂ နှစ်)
ကောင်းပြီ၊ ဒါကကျွန်မရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးဂျာနယ်ပါ ငါ့အတ္တကိုလျှော့ချပြီးငါ့ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့အကြောင်းပြောပြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ဒီမှာသွား။ ကောင်းတဲ့ရာထူးကိုယူပြီးရေခဲပြင်အေးတဲ့ Budweiser တစ်ပုလင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်၊
ရွှေဝါရောင် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကညစ်ညမ်းမှုနဲ့လိင်အကြောင်းကျွန်မမသိခဲ့ဘူး။ ငါကျောင်းမှသူငယ်ချင်းအချို့နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်သောအခါအပြစ်မဲ့လုနီးပါး ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိလို့မှတ်မိနေတယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကငါတို့မှာလိင်ပညာရေးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လိင်ကိစ္စဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကအဲဒီပုံရိပ်တွေကငါ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုအရူးဖြစ်စေခဲ့တယ်။ တစ်နှစ်၊ နှစ်အကြာတွင် M ကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးထိုကြီးမားသောအိုများကိုလည်းစတင်ရရှိသောအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဲ့ဒီတုန်းကငါတို့မှာ modem တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ ဒီတော့ streaming video ကအငြင်းပွားစရာမရှိတော့ဘူး။ youporn.com တို့လို site တွေမရှိဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ငါသူတို့မသိဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကလိင် drive ကိုမြင့်မားတယ်။ သာမန်မိန်းကလေးတွေတောင်မှဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲ၊
ငါအသက် 16 နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့မှာ porn regurlarly masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့မိသားစုထဲမှအကြီးဆုံးသားတစ်ယောက်အနေနှင့်ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ပြီး၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအရာရာသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှန်မှန်ကျဆင်းခဲ့သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်မှာကျနော့်ရဲ့လိင်စွမ်းအားဟာအရင်ဖြစ်သင့်တဲ့အရာအနည်းငယ်အထိလျော့သွားသည်။ လိင်ကကျွန်မကိုသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ အပျိုစင်ဖြစ်နေတုန်းပဲဆိုရင်တော့ငါဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းငါ့ကိုစွန့်ခွာထွက်ဖို့ porn အမြဲတမ်းရှိနေလို့ပဲ။ မင်းလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမင်းရဲ့လက်ကမင်းကိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့အော်ဂဇင်တွေပေးတဲ့အခါမင်းဟာမိန်းကလေးတွေကိုဘယ်သူလိုချင်သလဲ။
ကျွန်မရဲ့အားနည်းတဲ့လိင်စွမ်းအားတွေရှိနေပေမယ့်အဲဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရည်းစားတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။ ငါကမိန်းကလေးတွေဆီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံတဲ့လေ့လာသူတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အတူတူပျော်စရာအချိန်တွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူမဟာငါ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူး၊ ငါတို့နောက်ဆုံးမှာတော့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ED ဟာသူ့ရဲ့အရုပ်ဆိုးတဲ့ ဦး ခေါင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပျိုးထောင်ခဲ့တယ်။ သူမသည်ကျွန်မထက်အသက်ကြီးပြီးအတွေ့အကြုံလည်းပိုသည်။ ယခုဤလိင်မှုကိစ္စသည်သူမ၏လိုအပ်ချက်များကိုလုံးဝမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်ကိုယခုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောပေါက်ပြီ နွေရာသီကုန်သွားတယ်၊
အချိန်ကုန်လွန်ပြီးတစ်ချိန်ကကျွန်တော်အလောင်းကိုရနိုင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ပါ။ ကွန်ဒုံးကို ၀ တ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသွားပြီး၎င်းသည်ရှက်စရာဖြစ်သည်။ အတော်များများကျရှုံးပြီးနောက်ငါလေးနက်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတီထွင်နှင့်ဖြစ်စေသေချာပေါက်ဖြစ်စေမကူညီခဲ့ပါဘူး Viagra, Cialis နှင့် Levitra တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီရာတွင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပုံရသော်လည်းဆရာ ၀ န်တစ် ဦး သို့သွားပြီးငါ့အားနည်းသောစိုက်ထူမှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်စတင်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
ငါရှည်လျား porn ငါ၏အပြဿနာများအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်ဖို့သံသယရှိခဲ့ပေမယ့်ငါ yourbrainonporn.com တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခါမှသာအပေါငျးတို့သအပိုင်းပိုင်းအတူတကွကျဆင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာသိပ် PMO ငါ၏အ desentization နှင့်ထုံများအတွက်အကြောင်းမရှိခဲ့ကြောင်းယခုယခုအခါဒါသိသာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဇန်နဝါရီလအဆိုပါ 1st 2012 ငါနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကုသပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နေ့ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါအပြည့်အဝ3ပတ် porn, masturbation, orgasm သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲသွားနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် relapse ။ ထိုနောက်မှထပ်မံ rikapses နှင့်မူးရူး။ ငါထင်တာကတော့“ ငါမှာရည်းစားတောင်မရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုသာအဘယ်ကြောင့်ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း။ ” ။ အခုတော့ငါလုံးဝစွန့်လွှတ်နောင်တရ။ ငါသာအားသန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ငါဟာပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်တော့မယ်၊ ငါ့ကောင်မလေးနှင့်အိပ်ယာမှာပြproblemsနာမရှိဘူး။ အသစ်သောမိန်းကလေးအိုအိုး၊ ပြီးပြည့်စုံသော Boobs၊ ဆံပင်နှင့်မျက်လုံးများနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောဆံပင်ရွှေရောင်။ ပြီးတော့သူမမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ယောက်အနေနဲ့မြွေရှိတယ်။ ဘယ်အကြောင်းပြချက်, rebooting မှတဆင့်ရရန်တကယ့်လှုံ့ဆျောမှု!
ဤသည်နေ့သည်နေ့ ၁၀ ရက်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်းနှင့်အင်တာနက်တွင်ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးများကိုတွေ့ရခြင်းမှနှိုးဆွခြင်းကဲ့သို့သောအနည်းငယ်တိုးတက်မှုများခံစားရပြီးဖြစ်သည်။ ငါ့ရဲ့အတွေးတွေကဒီကောင်မလေးအသစ်ကိုပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ P. ကိုတောင်စေ့စေ့ကြည့်ဖို့တောင်မတိုက်ဆိုင်သေးဘူး။
R-Evolve - (နေ့ ၄၃)
က Short အနှစ်ချုပ်: ကျွန်တော်အသက် ၂၂ နှစ်ပါ။ ငါအကြောင်းကို 22 နှစ်အရွယ်မှာ M-ing စတင်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၄ နှစ်မှာ M-ing မှ P ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ပျမ်းမျှစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းနှစ်နှစ်ကြာချစ်သူရည်းစားရှိခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့လမ်းခွဲပြီးနောက် P နှင့် ED ကိုသွေးဆောင်ပြီးနောက်ငါနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်နောက်မိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားချိန်တွင်ပိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လောလောဆယ် rebooting လုပ်နေတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရည်းစားရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်မပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့လို့ကျွန်မဟာရှက်ကြောက်မိလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမခက်တော့ဘူး။ တစ်လလောက်အကြာမှာငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ကိုကျော်ပြီးကျွန်မတို့ရဲ့ပထမနှစ်အတွက်တစ်ပတ်မှာ 19-3 ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်လျှောက်လုံးငါ P ကိုအလေ့အကျင့်နှင့်အတူပေါ်သယ်ဆောင်ပေမယ့် သာ တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်ခန့်။ (အဲဒီအချိန်ကငါဘာမှမမှားခဲ့သလိုသူလည်းမတွေ့ခဲ့ဘူး) ။
သူနဲ့အတူနေတဲ့ဒုတိယနှစ်မှာတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့သူမကိုတစ်လတစ်ခါသာတွေ့ခွင့်ရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါက P သိပ်ပြီးများများစားစားမရလာတော့အခုချိန်မှာ P ကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးကြည့်နေပြီ။ လိင်မှုကိစ္စပြုခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာအစပြုဖို့ကြိုတင်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်လေ့ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူမနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားတယ်။ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်လျှောက်မှာငါသူ့ကိုအစဉ်အဆက်ချီးမွမ်းခဲ့မှာမဟုတ်သလိုငါ့ရဲ့ခံစားချက်၊ ငါအရမ်းဝေးကွာနေရတဲ့အကြောင်းရင်း PMO ဆိုတာသေချာတယ်၊ ငါဟာ 'အခုအချိန်မှာမနေဘူး' လိုပဲ
ထိုနောက်မှတဖန်ငါညစဉ်ညတိုင်း P ကိုစောင့်ကြည့်ပေါ်မှာထမ်း။ ကျွန်မအကြောင်းကို 15 Firefox ကို tabs များစုံလင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေ, မျိုးစုံအမျိုးအစားများနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ကြမည်ဖြစ်သည်အဖြစ် P ကိုဤနေရာတွင် esculated ။ ဒီအကြောင်း6လကြာပေါ်မှာထမ်း။
အဲဒီနောက်မှာငါတကယ်ကြိုက်တဲ့အလုပ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ သူမငါအရမ်းပူသည်ဟုထင်သည်ကိုကြားခဲ့ရသောကြောင့်သူမအတွက်နံပါတ်တောင်းရန်သတ္တိမွေးခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သိကျွမ်းပြီးနောက်ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မအဲဒါကိုမထနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၄-၅ ကြိမ်လောက်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး၊ သူမငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအချိန်တိုအတွင်းသာရနိုင်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ရန်လည်းလိုသည်။ သူမစိတ်ရှည်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့တော့ဘဲကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံတာကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘူး။ ထိုအချိန်က YBOP အကြောင်းကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမကြားဖူးပါ။ သူမကသူမနှင့်ဘာမှမပတ်သက်သော်လည်းသူမမှာ porn အလွန်များများစားစားကြည့်နေသောကြောင့်ပြtheနာဖြစ်နိုင်သည်။ ငါထင်တာကတော့ P ကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိလို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ်လအထိနောက်ထပ်နှစ်လလောက်မှာ porn နည်းနည်းကိုကြည့်ခဲ့တယ်။
ငါ YBOP ကိုရှာပြီးငါက PED ED ကိုသွေးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ် ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရတာခက်တယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်ကိုသုံးပြီး M-ing တောင်မှငါ့ကိုမခိုင်မာဘူး ငါလုံးဝကြည့်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထင်ရှားသည် - ထို့ကြောင့်ငါချက်ချင်း reboot ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အခုငါရောက်နေပြီ အဘယ်သူမျှမ PMO ၏နေ့ 43 😀 - (မေလ ၁ ရက် ၂၀၁၂)
- နံနက်တိုင်းစိုက်ထူခြင်းမရှိပါ - ပုံမှန်နံနက်သစ်သား / သံမဏိ
- တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားခြင်း - လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲတဲကိုဆောက်နိုင်သည်
- ယေဘုယျအားဖြင့်အတော်အတန်လူမှုရေးဆန့်ကျင်ခြင်း - မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောသောအခါ၊
အစဉ်မပြတ်ငါထွက်ညတွေမှာမိန်းကလေးများနံပါတ်များကိုရတဲ့အချိန်အတော်လေးကောင်းသည်, ဒါပေမယ့်သမ္မာသတိရှိကြလော့တစ်ဘေးအန္တရာယ်ခဲ့သူတို့နှင့်အတူထတွေ့ဆုံ။ ငါဒါပျင်းစရာများနှင့်ဝေးလံသောလိမ့်မယ်များနှင့်အပြည့်အဝအနားယူဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ငါသည်လည်းအမှုအရာနောက်တစ်နေ့အဆင့်အထိရွေ့လျားဖို့တိုက်တွန်းရှိသည်မဟုတ်မယ်လို့, ဒါကြောင့်ဘာမျှမတကယ်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးအနည်းငယ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ပရောပရည်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာပိုပြီးပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်နေ့စဉ်ရှင်းလင်းလာသည်နှင့်တူသည်။
ဒီအသိုင်းအဝုိင်းတွေ့ပြီဝမျး။ ငါ 40 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကို 10 + နှစ်ပေါင်းလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်အချိန်ကျော်, ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မရင်းနှီးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပေါ်အလွန်မှီခိုကြီးပွား။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူအလွန်ရံဖန်ရံခါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါငါ friar tugging နေချိန်မှာငါခက်မျှပြဿနာမရနိုင်ကြောင်းတွေ့သော်လည်းမမှာအားလုံး။ ကိုယ့်သူမငါ့ကိုအလုပ်ရှိသမျှကိုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပဲအမြိုးမြိုးရှိနမုသာစကားကိုဆိုလိုသည်မှာအိပ်ရာအတွက်အလွန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, ငါ့ဇနီးကချပေးလိုက်ပါတယ်။ ငါနေဆဲကြောင်းသူမ၏နှင့်အတူခိုင်မာသောငါ၏မရှိခြင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို, သောပြွန်ခြင်းငှါသွားလေ၏ကျနော်တို့ခွဲ။
ကာယချစ်ခင်မြတ်နိုးသူနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမအသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်ကိုရလာတဲ့အခါ (အဲ့ဒီအချိန်ကာလကရဖို့အချိန်ယူရတယ်) ကကောင်းလိမ့်မယ်။ ငါဟာခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရင်းပြန်ရှင်သန်နိုင်တော့မှာပါ။ ငါ့ကိုအိတ်ထဲမှာလှည့်ပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိမယ်။ အန်စာတုံးမရှိပါ။ ၃/၄ လောက်ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းရခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ငါအာရုံခံစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မထားဘူးဆိုရင် (ဒါပေမယ့်သိပ်ကိုအာရုံမစိုက်ဘူး၊ ငါတော်တော်များများကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသေချာပါတယ်။ ) ငါမတတ်နိုင်ဘူး ရှည်လျားသောအလုံအလောက်လာရန်တက်ထားပါ။ သူမကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာဒီပြproblemနာကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုမမေးခင်နှစ်ပေါင်း ၂ နှစ်လုံးလုံးငါတို့ဖြတ်သန်းခဲ့မိတယ်။ ငါကပို။ ပင်ခက်ခဲခက်ခဲနှင့်အပြီးသတ်နေဖို့အရင်ကထက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါနေဆဲ ပို. ပို. ထက်ပိုပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း, porn အားလုံးကိုအဲဒီအခြိနျ masturbating ခဲ့သည်။ ငါအနိုင်နိုင်အစဉ်အဆက်တစ်ရက်လွဲချော်။ အဆိုပါ wank အစည်းအဝေးများငါ့ကိုအလွန်ခက်ခဲဖြစ်ခြင်းနှင့် 30 မိသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဘို့အသွားပြီးနောက်ကြီးမားသော orgasm ရှိခြင်းနှင့်အတူ, တော်တော်စိတ်ကူးရှိကြ၏။ masturbating သည့်အခါသို့သော်ငါသည်ငါ့ **** န်းကျင်သေဆုပ်ကိုင်ခဲ့, ဒါကြောင့်တစ်ဦးသောယောနိ၏အနှိုင်းယှဉ်အာရုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်အဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမမှားဘယ်အရာကိုမေးသောအခါ, ငါနေဆဲက tugging, ဒီမှာငါ့ကိုလုယူသော link တစ်ခုရှိ၏မယ်ဆိုရင်ရှာတွေ့ Googled ခဲ့ဝန်ခံခဲ့သည်။
ပထမစာမျက်နှာအနည်းငယ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက် P&M အအေးကြက်ဆင်ကိုဖြတ်ဖို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အရင်ကကျွန်တော်အကြိမ်အနည်းငယ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ကကျွန်မရဲ့ (အလွန်ပူပြင်းတဲ့) GF ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲချင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ P (သို့) M မရှိတဲ့ ၅ ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲသူမအနေဖြင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုလုံးအတွက်သူမအနေနှင့်အပြင်းအထန်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါလက်ကိုမဆန့်ကျင်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုကို (၄) ကြိမ် (၅) ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှင့်သူမအတွင်း၌ရှိနေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ပိုမိုပြင်းထန်လာသောခံစားမှုနှင့်အတူပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့သည်။ စိတ်ပျံ့လွင့်စေသော (နှင့်တစ်ခါတစ်ရံစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းထဲမှထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်ကိုသူမကိုလှည့်စားသည့်အရာဟုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ အခုတော့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသွားပြီ၊ porn ကိုပြန်သွားချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ဘဝ၏အခြားအရာများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီဖိုရမ်ကိုတွေ့ပြီဝမ်းသာတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုဒီနှစ်ခုကဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဒီမှာမက်ဆေ့ခ်ျကနေသင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
အရှုံးသမား-လူ့ထံမှ Werewolf (5 လအတွင်းအစီရင်ခံစာ) မှ
Relapses: မတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ - PMO ကိုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်
ယေဘုယျအား Mood: ကောင်းသော
ချဉ်းကပ်နည်းတော့ပူပန်: (လိုလားတဲ့တက်ကြွတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူ) 60%
ငါ PMO စတင်ခဲ့ရာ 13 ၏အသက်အရွယ်ကတည်းကကြောင့်အားနည်းနေစိုက်ထူရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကို: Ing (များသောအားဖြင့် P ကို):
ငါးမိန်းကလေးငယ်များ, Shit ကျဆင်းနေနဲ့တူခံစားခဲ့ရပေမယ့်ငါမိန်းကလေးငယ်များမကျေနပ်မှုတွေနဲ့စွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုသောမြင်ကွင်းကိုကြောက်ခဲ့တာ, ဒီတော့ငါကြင်နာငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
လိင်အခွင့်အလမ်းများကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုရန်လို / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးရန်အနှောက်အယှက်မပေးခဲ့ပါ။
ရာနှင့်ချီ။ (Porn တကယ်ဟမ်, သင့် drive ကိုအတူ messes?)
ခြောက်လမိန်းကလေးငယ်များ, ငါသည်အပင် (စေ့ညှစ်သတ်သူတို့ကိုရိုက်ထိုးဖောက်နိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက်အမာခံသွားကြဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်, ငါသည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထိုပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ခဲ့တယ်သူပထမဦးဆုံးခဲ့, သူတို့ကအားလုံးကချစ်ရသလိုပဲငါသော်လည်း, ကရှက်ကြောက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည် က) ငါအရာတိုင်းကိုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကြောက်စရာခဲ့သည်
ပထမဦးစွာအစဉ်အဆက် ED တှေ့ဆုံ:
ဘဝမှာပထမဦးဆုံးမိန်းကလေး (ငါတောင်မနမ်းကြောင်း), ငါ 17 သို့မဟုတ် 18 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ တစ်ခုစိုက်ထူလာပြီခြင်းမရှိဘဲ, သူမ၏အပြီးအမျိုးသမီးများ၏လက်တဆုပ်စာ Cuddled ။
ဆက်ဆံရေးငါ၏အပြဿနာအကြောင်းကိုငါ့အလီယံ / စွဲကြောင့်ပျက်ကျ:
နှစ်ခုထဲကနှစ်ခု (တစ်နှစ်ဆက်ဆံရေးနှင့်နှစ်လဆက်ဆံရေး), အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်, ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးညဥ့်အခါကထမရနိုငျသောကွောငျ့, ငါဆက်ဆံရေးသို့ဝင်။ ဒါဟာသိ။ အတွက်နှင့်အတူရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်မရ ကောင်မလေးပေမယ့်ဘာမှမထက်သာ။ ကောင်း၏။
အိုကေ, ငါနောက်ဆုံး M'ed 2011 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလရဲ့အစ၌ရှိ၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ သာမန် (Semrectrect sex) နှင့်ကောင်းမွန်သောလိင် (Viagra အသုံးပြုမှု, ဒါကြောင့်အပေါ်မှီခိုချင်ကြပါဘူး, သင်၏ ဦး ခေါင်း၌သွေးပြန်ကြောသွားသကဲ့သို့ခံစားရတယ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာပေါက်ကွဲစေချင်တယ်၊ နောက်ဆုံးအချိန်ဟာ ၂၀၁၂၊ ဇန်နဝါရီလရဲ့အစဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါမလာခဲ့ဘူး၊
အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှင့်အတူရှုပ်ထွေးမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ငါ (အမျိုးသမီးချဉ်းကပ်မှု၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုအနိုင်ယူနိုင်ရန် PMO မှထွက်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်တက်ကြွစွာတက်ကြွစွာ“ ဂိမ်း” ကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်လားဆိုတာမသေချာဘူး) မိန်းမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှက်တတ်လာတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ငါအရမ်းပြင်းထန်လာတယ် အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုနိမ့်ကျခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ တဖန်“ ပုံမှန်” ဖြစ်လာသည်။
အကြှနျုပျ၏တိရိစ္ဆာန်မိမိကိုယ်ကို (မှန်မိမိကိုယ်ကို) တစ်ညတစ်ခွင်လုပ်ဖို့လိုသည်။ ကျွန်မအဝေး (ရေရှည်) ယခု -relationships ထံမှနေဖို့, ငါသည်ထိုသူတို့ကိုအားဖြင့်ဒါ pussified ရ။ ငါအပြည့်အဝ reboot ဘယ်တော့မှဆိုရင်, ငါရေရှည်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ခြင်း၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှာတွေ့ဖို့ရှိသည်ပါဘဲ။ (ဆုံးရှုံးမှုကြောက်လန့်ငါ့အကြီးမြတ်ဆုံးရန်သူဖြစ်တယ်)
အခြားသူများ၏လေးပတ်မှရှစ်ပတ်ကြာပြန်လည်စီးဆင်းမှုများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးသည်။ (ငါခဲ့ရတယ်, haha)
ငါ ၁၃ မိနစ်မှ စ၍ မိနစ်ပေါင်း ၆၀ မိနစ်အကြာတွင်အပြည့်အဝစိုက်ထူခြင်းကိုတစ်ခါမှမကြုံဖူးပါ။ (Viagra ကိုမရေတွက်ပါ) ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုစကားလုံးများဖြင့်ရှင်းပြ။ မရပါ။ စူပါပါဝါ ... 😮
ငါသည်ဤ post အခါ, ငါအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကို တစ်ရက် 90 ။ အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားလိင်စိတ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲ "ဘဝ" ၏အရိပ်လက္ခဏာ။ ငါ (လိင်မှုဆိုင်ရာ ED) ပျက်သွားပါလိမ့်မယ် & ရံဖန်ရံခါရိုက်နှက်မှု (အမျိုးသမီးအစပျိုး) နဲ့ Burn (စွန့်ပစ်ခြင်း) ငါစစ်တိုက်ခြင်းငှါခိုင်မာတယ်။
ငါ့ယောက်ျားတွေကိုမည်မျှကိုချိုးဖောက်ဒီချည်နှင့်၎င်း၏တကယ်နှလုံးပေါ်မှာတိုင်အပေါငျးတို့သကိုဖတ် 15 အဖြစ်ပင်အဖြစ်နုပျို, ဒီပြဿနာရှိသည်, ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်ကျွန်တော်နှစ်သက်သောသူမြားမြားထ messes.
ဒါကြောင့်တခြားလူတိုင်းကယ့်ကိုပွင့်လင်းရိုးသားဖြစ်နေလို့ပါကတည်းကဒီမှာငါ့အဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်သည်ပညာ၏နည်းနည်းသင်တို့တွင်အချို့သောအငယ်ယောက်ျားတွေ, ဖြစ်ကောင်းမှလေ့လာသင်ယူနိုင်မလည်းရှိသေး၏။
ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မကြာသေးမီအချိန်အထိမတည်ရှိတော့သည်။ ငါကြင်နာစွာ uni မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုန်းရှောင်။ ငါတစ်ခါမှမရပ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ အကြောင်းကတော့အဲဒါဟာငါ့အတွက်အကျင့်ယိုယွင်းပုံရတယ်၊ ငါလည်း wimp နည်းနည်းပဲဖြစ်ရမယ်၊ ငါဒီနွေရာသီမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ မှောင်မိုက်နေတဲ့အခန်းထဲမှာအတူနေပြီးနမ်းရှုပ်နေပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နမ်းရှုပ်နေခြင်းကိုအတူတကွခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်မဟုတ်ပါ၊ သူမသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မိုင် ၃၀၀၀ အကွာတွင်နေထိုင်သည်။ ထိုညတွင်ကျွန်ုပ်တို့ခွဲခွာခဲ့ရသည်။ Skype မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစကားပြောနေကြတယ်၊ နောက်လလောက်မှာငါဟာ V- ပြားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုငါနောက်ဆုံးမှာသဘောပေါက်သွားပြီးငါဟာဒီနွေရာသီမှာသူ့ကိုတစ်ပတ်သွားတွေ့ပြီးသူတို့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်ဟာ Skype ကိုပြန်သွားခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့်အခြေအနေတွင်ပါပဲ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကတော့နည်းနည်းလေးခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ကွန်ဒုံးတွေကငါတို့အတွက်အသုံးမပြုနိုင်တဲ့အတွက်လေထီးမပါဘဲကောင်းကင်ပြာမခုန်ခဲ့ဘူး၊ ရဲရင့်တဲ့ (ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံခြင်း) ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မောင်းနှင်ခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူတစ်ချိန်ကခဲ့ကြသည်မဟုတ်, သစ်သားရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်၏တစ်လျှောက်လုံးအရာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သစ်သား ၇၀% ခန့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးအချို့သောအချိန်များတွင် (အပြင်ဘက်တွင်သိသာထင်ရှားသည်) ပြီးစီးခဲ့သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသင်၏ D ကိုအလုပ်မလုပ်ဟုထင်လျှင်မိန်းကလေးကမကောင်းဘူး။ သူတို့နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုအခွင့်အလမ်းအလွန်ဆိုးရွားသွားစေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုအလေးအနက်ထားအဆင်မပြေပြောဆိုမှုများအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာသူမကိုညစ်ညမ်းတဲ့ porn လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ သူ့ကိုတကယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးများစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည်မှာအနည်းဆုံးယောက်ျားများကဲ့သို့တူညီသောပုံစံမဟုတ်ပါ။ တကယ့်ကိုဆိုးရွားလှတဲ့အရာကတော့သူမတွေးမိတာကကျွန်မရဲ့ D မခက်ခဲတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူမကိုသူမဆွဲဆောင်နိုင်လို့ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုယ်ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ ၎င်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားမှု။
ငါ့ D ကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်စေချင်တယ် ငါအရင်ကတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးသူမ၏နေရာများယူရန်သုံးနိုငျသောကျောက်အစိုင်အခဲစိုက်ထူချင်တယ်။ Shes တွင်ရည်းစားအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း၊ O. မရှိခဲ့ပါ။ ငါသိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုရှာဖွေခဲ့သည်၊ သူမသည်သာသနာပြုရာထူးကိုပိုနှစ်သက်သောကြောင့်၎င်းသည်သူမ၏ V နံရံကိုဖိအားပေးမှုကိုဖြစ်စေသောကြောင့် G ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ -spot မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးကသူမမှာတစ်ယောက်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ ငါသူမရဲ့စိတ်ပြောင်းချင်ပေမယ့်လုပ်ဖို့ငါ့အရိုးထဲမှာပြန်အရိုးလိုတယ်။
ငါ့အသက် ၁၃ နှစ်မှာကတည်းကငါညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​ငါအသက် ၂၆ ဖြစ်လို့ငါ့ရဲ့ဘဝတစ်ဝက်လောက်ပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်နှင့်မမိတ်ဆက်ခဲ့ဖူးပါက၊ အဲ့ဒီတုန်းက dial-up နဲ့အရာအားလုံးဓာတ်ပုံတွေပဲ။ Broadband ဆက်သွယ်မှုများလာသောအခါအခြေအနေများပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ porn သင့်ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်ခိုးယူ အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသင့်ဘူး၊ သင်ဤအရာများကိုသဘာဝအတွက်ရှာဖွေရန်လိုသည်၊ အွန်လိုင်း pics / video များကိုမကြည့်ပါနှင့်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးပါကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးယခုအချိန်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ သင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်ကြည့်နေသောညစ်ညမ်းအမျိုးအစားသည် ပို၍ ပင်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်တော့်အဆိပ်ကဒီအပျော်တမ်းစုံတွဲတွေဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော့်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဗွီဒီယိုတွေပါ။ အဲဒါကိုမင်းစဉ်းစားမိတဲ့အခါအရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဘိရှော့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနေခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင်ကလေးဘဝတုန်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းကသင့်ကိုလုံခြုံမှုမရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ သူသည်အခြားသူများနှင့်မတူဘဲအရွယ်အစား / ပုံသဏ္notာန်မဟုတ်ဟုထင်နေသည်။ သင့်အနေဖြင့် ၄ ပေခန့်သာရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲမလုံခြုံမှုတွေကဘယ်တော့မှမသွားဘူး၊ ပြီးတော့သင်ဟာကြီးထွားမှုရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့များစွာသောအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့မှော်အခွင့်အလမ်းတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအောက်တိုဘာလကုန်မှာ porn ကိုလုံးဝမကြည့်တော့ဘဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ Ive သည်အကြိမ်အနည်းငယ်ပျက်ကွက်သော်လည်းလက်ရှိတွင် ၁၀ ရက်ရှိခဲ့သည်။ နံနက်သစ်သားအရိပ်လက္ခဏာ၊ မှန်မှန်မဟုတ်၊ အိမ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ရေးစရာဘာမှမရှိ။ ငါမှတ်မိသည်ထက်ကြာကြာအတွက်စိုစွတ်သောအိပ်မက်, တောင်မှတစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက်မက်။ ငါဤအရာအားလုံးကိုပြန်ကောင်းကောင်းစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုလိုချင်သည်။ ငါကြီးပြင်းလာတဲ့ porn ကိုစွဲစွဲလမ်းမှုကငါ့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုကိုခိုးယူသလိုခံစားရတယ် ငါ၌၎င်းသည်အလွန်အထိခိုက်မခံသောနေ့ရက်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်လက်တွေ့ကျကျမရှိသောအခြားသူများရှိခဲ့သည်။ Porn ဟာကျွန်တော့်အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝကိုများစွာဖြုန်းတီးမိပြီးကျေနပ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်လောက်မှာကျွန်တော် porn ကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာက ၁၀၀% တောင်မှတောင်မှကျွန်တော်မကြည့်ခဲ့ဘူး၊ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထပ်မံစိတ်ဝင်စားလာအောင်ငါကြည့်နေတဲ့အရာရဲ့အစွန်းရောက်သဘာဝကိုမြှင့်တင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဖြစ်စဉ်ကိုသာအမှုအရာပိုမိုဆိုးရွားစေ။ မဟုတ်ပါ၊
ဒါကြောင့်ငါ့အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုလက္ခဏာမတွေ့ရသေးပေမယ့်ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါအားကစားခန်းမကိုသွားမယ်၊ ဆွဲတဲ့ဘားတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ ငါကေဂျယ်လ်လုပ်နေတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် PC ကြွက်သားကလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကြွက်သားပဲ။
မနေ့ကနေ့ ၁၀၀ ရှိခဲ့တယ်။ ငါဘယ်လောက်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာမရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူး.
NoFap ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီနဲ့ကျွန်မပြန်ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် fapping မှ fapping သွားဖို့ငြင်းဆန်ငါကြင်နာကြောက်တယ်တဲ့ faptacular လမျးခရီး၌ငါ၏ဝီလီကိုထိဖို့ဖြစ်၏။ ငါမကြာသေးမီက Ketogenic အစားအသောက်များတွင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်နေ့ 100 အပေါ်ငါ့မိတ်ဆွေကသူ့ကို P90X ကောင်းတစ်ခု torrent ကိုရှာဖွေငါ့ကိုမေးတယ်။ ကျနော်တို့အတူတူနေ့တိုင်းကြောင်းလုပ်နေတာစတင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုပြောပြရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ငါတကယ်ငါသူတို့ရှိလိမ့်မည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျသောအခါသူတို့အား ABS ဒါမယ့်ရချင်တယ်။ porn စွဲနီးပါး, ငါကအကြောင်းအထဲကရှာတွေ့နိုင်အောင်ဝမျးသာငါ့အသက်ကိုပျက်စီး။ ငါကစေလူမှုတော့ပူပန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါသည်လည်း ED ခဲ့ငါလူမှုရေးရသေ့ကြောင့်, ငါနံနက်သစ်သားတယ် NoFap သို့စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်တိုင်အောင်, သတိပြုမိခဲ့ပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးစိတ်ကို fuck ဆိုတဲ့ကြင်နာခဲ့သည်။ ဒါဟာငါသည်သန့်ရှင်းသော shit ကဲ့သို့ဖြစ်၏အုတ်တစည်းကဲ့သို့ငါ့ကိုထိသွားတယ်! နောက်ဆုံးသောကာလငါသည်ဤသည့်အခါရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သလဲ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အသက်ကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်ကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါမိန်းကလေးတန်ချိန်အပေါင်းတို့နှင့်ကြောင့်ရတဲ့အထဲကငါမသော်လည်း, ငါအလိုရှိကြသည်တွင်ဘာပဲရတဲ့ငါ့လမ်းအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏။ ငါ့စုံတွဲတစ်တွဲအမှုအရာကို fix ဖို့လိုအပ်အလေးချိန်နှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာလာပြီကြောင်းလုပ်နေတာစတင်ခင်မှာ။ ကြောင်းပြုသည့်အခါကျွန်မအားကြီးသောထှကျလာပါ၏ အဘယ်သူမျှမကမိန်းကလေးအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်😉
အကြှနျုပျ၏ဇာတ်လမ်းကိုအတို: ငါအသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်မှာလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားကတည်းကငါမှာ ED ရှိနေတယ်။ အလွန်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်, ငါ့ကိုအမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းထုတ် / ယခုတိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှဉ်းဆဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်က Ive တွင်မိတ်ဖက် ၅ ဦး မှ ၆ ယောက်အထိရှိပြီး ၄ င်းသည်ထိုးဖောက် ၀ င်မှု / အော်ဂဇင်ကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သျောလညျး - ငါလိင်စဉ်အတွင်း "ဘာမှမခံစားရပါ" ရှိသည်နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်ရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားနိုင်သည့်အချိန်ပင်လျှင်ကျွန်ုပ်မည်မျှ“ စိုက်ထူသည်” ဟုအမြဲတမ်းမေးခွန်းထုတ်ပြီးခံစားမှုမခံစားရပါ။
မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများစွာအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည် (၄) နှစ်မျှလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲသွားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကျနော်တို့ကချွတ်နှိပ်ပါ။ ကျနော်တို့နှစ်ကြိမ်အတူတူအိပ်ခဲ့ရတယ်၊ နှစ်ခါစလုံးကငါ / orgasm ကိုထိုးဖောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ တတိယအကြိမ်ကြိုးစားမှုမှာတစ်မိနစ်ခန့်အကြာ၌ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်၏ကြောက်စိတ်များ / စိုးရိမ်မှုများအားလုံးချက်ချင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ငါစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ကြောင်းသက်သေပြရန်ငါမတူညီသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ကြိုးစားခဲ့ပြီးရလဒ်လုံးဝမရှိပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာစိတ်ဓာတ်ကျမှုနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအောက်မှာကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး လာရောက်သောအခါသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာလာသည်။ (အလွန်အမင်းနိမ့်ကျသည့်ဗီတာမင်dအဆင့်မှသည်အသက် ၇၀ အရွယ်အမျိုးသားသာဖြစ်သည်။ ) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှတစ်ဆင့်ရုတ်တရက် / အော်ဂဇင်ကိုရရှိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အသက် ၆၅ နှစ်ပြည့်သည်။ % စိုက်ထူခြင်း - အဓိပ္ပာယ်ရှိလျှင်မည်သည့်အခါမျှ“ angling up” မရှိပါ။ ဒါကြောင့်ထိုးဖောက်မှုသွားသည်အထိမိန်းကလေးတစ်ယောက်ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေချိန်ကိုငါဘယ်တော့မှမထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ စိုက်ထူ၏လက်ငင်းဆုံးရှုံးမှု။
ယခုငါဤအခြေအနေများတွင်“ လုံးဝ” နှိုးဆော်ခြင်းမခံရလျှင် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမိန်းမသည်ဘာမှမပြောနိုင်သည့်အဆင့်တွင်ထိုးဖောက်ခြင်း / ဖျော်ဖြေခြင်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်) ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ နံနက်သစ်သားသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းများကိုကျွန်မမရတော့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်။
ဤအဖိုရမ်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, ငါဂန္ p / m / o စှဲလမျးသူဖြစ်ကြောင်းကို KNOW ။ အမြဲအတူတူအနေအထား 3-4 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်, အစဉ်ငါ့ house- အတွက်နေရာတစ်ခုတည်းမရှိသလောက်ငါပွုသညျ့အခါအစဉ်အဆက် horny လျှင်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှာအကောင်းဆုံးစက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပင်သို့ဖြစ်လျှင်ငါမရှိသလောက် 70% လို့ပြောပြီးရင်ပိုကောင်းတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်။
ဤနှင့်အခြားဖိုရမ်များစွာ၏အကြံဥာဏ်များအရကျွန်ုပ်သည် P / M / O မရှိဘဲရက်ပေါင်း ၉၀ သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး 90G ကိုစတင်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်လိင်ကုထုံးပညာရှင်လည်းပါ) ။ ပထမရက်သတ္တပတ်သည်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ = ငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း (၃) ခု (၄) ခုနှင့်နံနက်သစ်သားပင်ကိုရရှိခဲ့တယ် (၁၀၀% မဟုတ်ပေမယ့်ဘာမှမရှိတာထက်ပိုကောင်းတယ်) ။ ပြီးခဲ့သည့်ညတွင်၊ ကျွန်မရဲ့အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုသတိပြုမိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆီသွားပြီး“ ဖျော်ဖြေခြင်း / စိုက်ထူခြင်း” ဟာပြanနာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကကျွန်တော်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနှစ်တွေတစ်လျှောက်ကျွန်မမှာရှိတာထက်ပိုပြီးပျော်ခဲ့တယ်။ ငါ့လိင်တံသို့မဟုတ်ငါ့စိုက်ထူမှုကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံခံစားမှုတစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်း။ ကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းသည်။ စိတ်ပိုင်းအလှည့်အပြောင်း။ သို့သော်ဤကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် ZERO စိုက်ထူမှုကိုရရှိခဲ့သည်၊ % -5% ။ ဒါကငါ့ကိုစိတ်ပူခဲ့တယ်။
Side-note- ကျွန်ုပ် ၄ နှစ်စာလုံးပေါင်းရိုက်ခဲ့သောမိန်းကလေးသည်ယခုပင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူနေထိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်။ (အောင်မြင်မှုနှစ်ခုနှင့်အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှမအောင်မြင်သောအရာမှအပ၊ ပါးစပ်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများမှအပအခြား) ။ အခြားဘေးထွက်မှတ်ချက် - သူမသည် porn porn ကြယ်ပွင့်ဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ငါဟာသူနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ယခုငါနှင့်အတူအကောင်းတစ် ဦး အရပျ၌ဖြစ်၏။ ငါတို့ကသူငယ်ချင်းတွေပဲ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသူမသည်သူမအလွန်လိင်ကသိသည်။ သူမ၏အတိတ်သိမှတ်ကြလော့ လိင်အကြောင်းတစ်နေ့လုံးသူမ၏ပြောဆိုမှုကိုကြားနာ။ ဒါဟာငါ့ကိုတကယ်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့၊ ငါနောက်ဆုံးည“ သုညနေ” ပြီးတဲ့နောက်ငါအခန်းဖော်တွေ Boob တွေကိုဟောက်လိုက်တယ်။ ချက်ချင်းနှိုးဆော်ခြင်း။ သူမသည်နည်းနည်းထွက်သွား။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ် ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သော porn မဟုတ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲ ... ဒါဟာအကြီးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါကအတင်းအကျပ် ငါစိတ်အခြေအနေမကောင်းခဲ့ဘူး၊ အခုငါနေမကောင်းဖြစ်နေပြီလား။ ငါဘာလို့ချိုလို့မရဘူး တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးသူတို့နှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကဘာမှမခံစားရနိုင်ပါ။ ငါသာမန်ဘဝဖြစ်ချင်တယ် အထူးတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ကလေးများရှိသည်။ အကျင့်ကိုကျင့်။ ငါတကယ်လုပ်ဖို့ငါ့စွမ်းရည်ကိုကြောက်တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၃ လကကျွန်ုပ်၏အခန်းဖော် / ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်နှင့်အိပ်ပျော်စဉ်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပျော်မွေ့နိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများအားလုံးပြေလည်သွားသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးငါဖျော်ဖြေနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အချို့သောရာထူး၌တည်၏။ နှင့်အချို့သောသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ။ နှင့် blah blah blah ။ ငါအမှုအရာပုံမှန်ဖြစ်ချင်တယ်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ရက်ကအရက် ၉၀ နှင့်အချည်းနှီးဖြစ်သော / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထူးချွန်ဆုံးသောအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းယခုငါနေမကောင်းသည်မှာရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာသွားပြီးကျွန်ုပ်၌အမြဲတမ်းကြုံခဲ့ရသောပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလာမည်ကိုကြောက်ရွံ့နေပြီဖြစ်သည်။ ငါဒီမှာ, ငါ့ကြိုးရဲ့အဆုံးမှာတော်တော်များများဖြစ်၏။ ငါဆရာဝန်တွေသွားပြီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး Cialis အလုပ်လုပ်ခဲသည်။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်စွမ်းကိုအခုတောင်သံသယဝင်နေပြီ။ အဘယ်ကြောင့်ငါကြာမြင့်စွာ "Erection" အပြည့်အဝမရကြဘူးဘာကြောင့်လဲ - နံနက်သစ်သားတောင်မှ။ ငါဟာကျိုးပဲ့လွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ခံစားမှုကိုမကူညီနိုင်ဘူး၊ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ... ငါအနာဂတ်အတွက်ငါမဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းကိုအတိတ်ကာလကတစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါ။ သို့သော်မေတ္တာမရှိသောဘဝသည်ကျွန်ုပ်သည်နေထိုင်ရန်မတတ်နိုင်သောဘဝတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အသံဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
မည်သူမဆိုအလားတူအရာမှတဆင့်ရှောက်သွားလျှင်ဒါကျေးဇူးပြုပြီး ... ။ မျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်မည်သည့်အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ပုံပြင်များမဆိုရှိခဲ့သည်။ အသုံးဝင်သောအချက်များ။ ဘာမှမ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာပြီးနောက်ငါ၌ထပ်တူပြproblemsနာများရှိနေသေးလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့မှုသည်မည်သည့်အရာဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မသိသော်လည်း၊ ၎င်းသည်အကြီးအကျယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသာကျွန်ုပ်ယူဆနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်မအသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီ၊ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို ၁၈ နှစ်အထိမသုံးခဲ့ဘူးပြီးတော့မကြာခဏပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြောရရင်ငါဟာတစ်ယောက်ယောက်နဲ့မကြာခဏချိန်းတွေ့တာကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒါကအမြဲတမ်းတကယ့်ဘဝအရာတွေကြားမှာအမြဲတမ်းဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာတကယ်တမ်းကျတော့မိန်းမတွေနဲ့ပြhadနာကြုံခဲ့ရသလို၊ အလွယ်တကူမတင်ထားပဲကြာရှည်စွာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကငါပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်၊ ဝေးဝေးဝေးကွာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်၊ ငါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံနဲ့လှည့်စားခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့တဲ့ဒီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲဟာတမင်တကာငါ့ကိုလွင့်မျောနေစေပြီးငါ့ရဲ့အမှားတွေကြောင့်ဒဏ္libာရီဆန်ဆန်လမ်းလွဲသွားစေတယ်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်း၌ကျွန်ုပ်သည် YBOP၊ စိတ်စွဲလမ်းမှု၊ ပြတင်းပေါက် ၁၀ ခုတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သောပုံစံများနှင့်အလေ့အကျင့်များစွာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ဇွန်လမှာအဲဒီဆက်ဆံရေးကအဆုံးသတ်သွားပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါနဲ့ချိန်းတွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအသစ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကကျွန်မတို့အတူတူအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါတစ်ညမှာအစည်းအဝေး ၃ ခန်းလုပ်နိုင်ပေမဲ့တစ်ခါမှမထနိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ လူများစွာကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည် Porn သွေးဆောင်ခြင်း ED ရှိကြောင်းမသိခဲ့ပါ၊ ချိတ်ဆက်မှုလည်းမပြုခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် gf နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ရုန်းကန်နေရစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အကျင့်ဆိုးများကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံသူမလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုစိုက်ထူကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလုပ်လုပ်၏အစား porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနိုင်ဘူး။ ညစ်ညမ်းဖို့ခက်ခဲနေတုန်းပဲ၊ ငါချစ်သောကောင်မလေးနှင့်အတူ ED သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်ဟုထင်မိသည်၊ တခြားသူတွေကိုစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှမိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်လောက်မှာ YBOP ကိုတွေ့ပြီးအဲဒီနေ့မှာပဲ porn ကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ“ စစ်မှန်တဲ့အရာ” ဟာမကောင်းဘူးလို့မထင်တော့ဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့အော်ဂဇင်ကိုဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်။ ငါoneပြီလ 20 ရက်နေ့မှာရုပ်ရှင်တစ်ကားတည်းနှင့်အတူစက္ကန့် ၃၀ လုံးလုံးအမြန်ပြန်ပြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဟာဘောင်းဘီကိုနစ်မြုပ်စေပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာငါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ blocker ကိုကျွန်တော့်လက်တော့ပ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ် ငါဒစ်ကို ၁၀၀% နီးပါးမပြည့်စုံသေးသော်လည်းပိုမိုခက်ခဲသည်ဟုယေဘုယျအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မနက် မှလွဲ၍ ၎င်းသည်ငါနိုးလာသည်နှင့်အမျှကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါနောက်ဆုံးသောကြာနေ့ကအော်ဂဇင်တွေကိုဖြတ်ပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ သူတို့ကကျွန်မကိုဖိနှိပ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ကျွန်မနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ပေါင်းပင်တွေကိုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်။ နက်ဖြန်နေ့၌ငါလွင်ပြင်ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသောအရာကိုသို့သွား၏, အလေးအနက်ထားဘာမျှမ, ငါ့ဒစ်ပင်ပုံမှန်ထက်သေးငယ်သလိုပဲငါဖတ်ပြီးဒါကြောင့်ငါအရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ခဲ့ ဒါကငါးမိနစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်မှုနှင့်အတူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာဒီသတင်းဟာကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမှတ်အသားပဲလို့ထင်ပြီးအလင်းရောင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ လမ်းအတော်လေးရှိပါတယ်။
ငါအရမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာလိင်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုခံစားနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့မှာ0တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအသုံးပြုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်၊ ငါ့ရဲ့ပြန်လည်ကျင့်သုံးမှုတစ်ခုကအပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်ခက်ခဲချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် NO chaser ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီမှာအဲဒီမှာတပ်မက်ခြင်းမရှိ, ဒါပေမယ့်ငါ့ဒစ်ယာယီနံနက်သစ်သားမှလွဲ။ ဘာမှအဘို့အခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခြား PMO စွဲသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိဟုထင်ရသည့်တစ်နေရာတည်းတွင်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးနေသောအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ယခုအခါကျွန်ုပ်၏ဒစ်ခ်ျသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုသာတုန့်ပြန်လိုသောပုံရှိသော်လည်းငါစိတ်ကူးကြည့်သောအခါ၊ ငါသိတဲ့အစစ်အမှန်မိန်းကလေးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တာ၊ ငါဟာချိုချိုရတဲ့အခါငါသိတဲ့အစစ်အမှန်မိန်းကလေးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့တာ။ Porn မှာအမြဲတမ်းရှိနေပြီးကျွန်တော့်အတွက်စက်လည်ပတ်နေဆဲပါ။ ငါဒစ်ကငါတကယ်လိုချင်တဲ့တကယ့်ဘဝကမိန်းကလေးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါငါတကယ်အလုပ်လုပ်ချင်ပုံမရဘူး။ ငါဖတ်သည့်အကြံဥာဏ်များအားလုံးသည်“ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုဖြတ်ခြင်း” အကြောင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်မလိုအပ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်မလိုချင်ပါ။ ကြောင်းအလိုဆန္ဒတုံ့ပြန်?
ငါဝေးလံခေါင်သီမဟုတ်သောရှိဆက်ဆံရေးအတွက်ငါနှစ် ဦး စလုံးအချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အခြားတာဝန်ဝတ္တရားရှိသည်ကြောင့်ကျနော်တို့ရင်းနှီးသောရရန်လုံလောက်သောတစ် ဦး တည်းလုံလောက်သောအချိန်ရကြဘူးသောကြောင့်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်မကျေနပ်မှုများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်နီးပါးတုန်ယင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝအပေါ်ကြီးမားသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။
၎င်းသည်၎င်းကိုမရရှိနိုင်ခြင်းမှတက်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမှကွဲပြားခြားနားပြီး၎င်းသည်ငါ့ကိုလျင်မြန်စွာပျော့ပျောင်းသွားစေရန်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်စေလိမ့်မည်။ ဒီဖြစ်ပျက်မှုတိုင်းမှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်အောင်ငါတကယ်သတ်ပစ်တယ်။ သူမအခိုင်အမာပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိတယ်။ သူမရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်မရဲ့နှလုံးကိုတကယ်ထိခိုက်စေပြီးအဲဒါကိုငါမမြင်ချင်တော့ဘူး။
ငါစွဲနေတဲ့ညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကြောင့်လိင်မှုကိစ္စကိုပျက်ပြားစေနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ ငါ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့ porn folder ကိုငါဖျက်လိုက်မယ်။
ငါခဏတာပဲငါ့ကိုခြောက်လှန့်နေတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုမျှဝေချင်တယ်၊ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှမပြောတတ်ဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုမီစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာရှိသလား၊ မနည်းနည်းနှင့်ကူညီပေးခဲ့ပါသလားဟုကျွန်ုပ်မေးလိုပါသလား။
LINK - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ရှိပါပြီ၊ ငါအသက် ၁၇ နှစ်မှာငါရည်းစားရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒါကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါဒါတစ်ခုတည်းအရာမဟုတ်ခဲ့သိတယ်။ သူမနှင့်ခွဲခွာရချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာမျှမတတ်နိုင်တော့ကြောင်းသိခဲ့သည် ငါ၌အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှည့်စားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်မိန်းကလေး ၈ ယောက်ခန့်ကိုငါနမ်းနိုင်တယ်လို့ရေတွက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကဘာမှမရှာဘဲနေခဲ့တာဒါကြောင့်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်။
အခု ၆ လလောက်မင်းဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအခမဲ့ဖြစ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါ့ခါးပတ်အောက်မှာ fap အခမဲ့သုတ်လိမ်းနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးငါသွားရမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထိတ်လန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါဟာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ငါ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောလိင်စိတ်မှတ်ဉာဏ်ဟာမအောင်မြင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါလုံးဝပြန်ကောင်းလာရင်တောင်မှငါအရမ်းကြောက်နေလိမ့်မယ်။
ပညာရေးကိုဒုက္ခရှိခြင်း။ ငါသည်ငါ့ nofap ခရီးကိုစတင်သငျ့သလော
ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသက် ၂၀ အရွယ်ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကညစ်ညမ်းသောအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့သည် (ပုံမှန် porn မှသည် animated porn သို့ fetish porn, သင်နာမည်ဖြစ်သည်) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ လှည့်စားခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေမတည်မြဲနိုင်ကြောင်းမကြာသေးမီကသတိပြုမိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ED သည်ကျွန်ုပ်၏အစောပိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနည်းပညာ (ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုညှစ်။ အပြည့်အဝမထွန်းကားစေနိုင်ခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူမ၏ပုံပန်းသဏ္problemာန်သည်ပြproblemနာဖြစ်သည်ဟုထင်နေသောကြောင့်ယခုပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်၌ gf ရှိခြင်းကြောင့်ပိုဆိုးလာသည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်သည့်အချိန်ကာလသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုအထောက်အကူပြုမည်လား။
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာစပြီးစကြည့်တော့တာပဲ။ ကလေးဘဝတုန်းကတောင်မှအမျိုးသမီးပုံစံကိုကျွန်မအမြဲတမ်းစွဲကိုင်ပြီးကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ငါစလုပ်တော့အံ့သြစရာပဲ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချဉ်းကပ်ပြီးစကားမပြောဘဲမနေနိုင်တာကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ မိန်းကလေးများကို Maxim နှင့် victoriassecret (soft stuff) စသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဝက်ဘ်ကင်မရာဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ငွေများကျဆင်းသွားပြီး hard porn porn ဖိုလ်ဒါများနှင့်ဖိုင်တွဲများအကြီးအကျယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်လာသည်။ ငါ့ stash ကိုငါကြိုက်တယ်
နှစ်ပေါင်းအဘို့, ငါဤပြဿနာကိုအတူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာများနှင့်ရရှိနိုင်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအဆုံးမဲ့ငွေပမာဏလုပ်နေတာအပြစ်လွတ်စေအကြောင်းပြချက်အမြဲရှိခဲ့သည်။ ကောလိပ်၌, ငါ၏အအခန်းဖော်နှင့်ကျွန်မ 1-10 စကေးကနေကျောင်းဝင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အမြိုးသမီးမြားတဝိုက်လမ်းလျှောက်သူတို့ကိုစကားပြောဖို့သတ္တိရှိခြင်းမဟုတ်နေတုန်းကသူတို့ပွဲစီရင်တော်လိမ့်မယ်။
ငါနောက်ဆုံးတော့ကောလိပ်၏ပထမနှစ်ကာလအတွင်းအသက် 18 နှစ်မှာရည်းစားရတယ်။ ငါအချိန်တန်မှမှန်ရာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမကကျွန်မကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာဘာဂိမ်းမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကပါးလွှာတဲ့ geeky ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ပါ။ သူကအဲဒီအချိန်တုန်းကသူမအတွက်လုံလောက်တဲ့အေးဆေးပြီးရယ်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ တစ်နှစ်အကြာသူမတောင်းစားပြီးနောက်သူမ၏အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်။ အဆိုပါလိင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမကသူမရဲ့အမှားပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်။ သူမအလုံအလောက် sexy မဟုတ်မှန်းငါစိတ်ထဲမှာဆင်ခြင်ခဲ့သည် (သူမဖြစ်သော်လည်းငါသူမ၏ BJs များကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်) ။ နာရီနှင့်ချီ။ လိင်နှင့်ရာထူးများပြီးသည့်တိုင်အောင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်ခက်ခက်ခဲခဲနှင့်အော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုသဘောပေါက်မိသောအခါသူမနှင့်မပေါင်းသင်းပါကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုခံစားမိခဲ့သည် အကြောင်းပြချက်များစွာနှင့်လိင်ပါဝင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးတန်းကောလိပ်တက်သည့်နှစ်တွင်ကျဆုံးခဲ့သည်။ ဒါဟာချစ်သူရည်းစားမဖြစ်မှီငါလုပ်ခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဒါဟာအပြင်းအထန်ငါးကြိမ် - တစ်နေ့ fapathons ပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နှစ်နှစ်အကြာတွင် Flash - ရှေ့ဆက် - ငါထွက်အလုပ်လုပ်, ငါ့ဂီတ / အနုပညာဘက်ကိုမွေးမြူ, ငါ့အသှငျအပွငျအပေါ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝပုံစံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အမေရိကန်၏အခြားဘက်ခြမ်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါကလပ် hit ဖုန်းနံပါတ်များကိုရယူပြီးရက်စွဲများလိုက်။ မပြောင်းလဲသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် fapping ဖြစ်သည်။ ငါက၎င်းကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်စောင့်ထိန်းသည်၊ သို့သော်တခါတရံ၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒီဟာကစွဲလမ်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်လို့ရပ်တန့်ဖို့အကြိမ်များစွာကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါအချို့မိန်းကလေးများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားခြင်းနှင့်အနည်းငယ်နှင့်အတူအိပ်ခဲ့ (NoFap အများစုဘေးဥပဒ်ပုံ ED အတူတူပင်ပြproblemsနာများရှိနေစဉ်) ။ ဤမိန်းကလေးများကကျွန်ုပ်အား“ ငါမတော်လျော်ဘူးလား?” ဟုမေးလိမ့်မည်။ အဖြေ, သိသာတဲ့ခဲ့ "သင်တန်းသင်ဖြစ်ကြသည်" ။
အကယ်၍ သင်ဟာအသက် ၅၀ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များမှာများသောအားဖြင့် ED ပြsayနာတွေရှိရင်၊ ငါနားလည်တာကဆီးချိုရောဂါဒါမှမဟုတ်အခြားပြင်းထန်တဲ့ဖျားနာမှုတစ်ခုမှလွဲရင်သင့် ဦး နှောက်ထဲမှာ ၁၀၀% နီးပါးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ dopamine သီအိုရီသည်အများအားဖြင့်အငြင်းပွားစရာများ၊ သမားရိုးကျ ED ဆေးဝါးသည် dopamine နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ၄ င်းတို့သည်ပြtheနာကိုသာဖုံးကွယ်နိုင်ပြီးသင်ကဲ့သို့ငါကဲ့သို့ဆုံးသွားသည်အထိ PMO ကိုသင်အလွဲသုံးစားပြုလိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးတောင်မှအလုပ်မလုပ်ပါဘူး သင့် ဦး နှောက်တွင် dopamine receptor များမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာအားလုံးရှိသည်။ အချိန်နှင့်အမျှအရာရာအထူးသဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သည့်အရာများရရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကအရမ်းတုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းတယ်၊ ငါဟာဘာမှမှမပျော်နိုင်ဘူး။ အစာစားခြင်းဟာငါရှင်သန်နေဖို့၊ မပျော်ဖို့မုန်းဖို့မလုပ်ချင်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ အရာအားလုံးနှင့်အတူတူပဲ .. ဘာမှငါ့ကိုမွေ့လျော်သို့မဟုတ်နာကျင်မှုဆောင်တတ်၏, ငါ့အတွင်းစိတ်ဘဝရုံမှိန်သွားပြီ။ ဒါကြောင့်ငါစိုက်ထူမှုမရသို့မဟုတ်မထိန်းသိမ်းနိုင်, ငါ့ ဦး နှောက်ကိုဂရုမစိုက်ကြောင်းထို့နောက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဆေးတွေကိုသုံးတဲ့အခါဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပါ။ သင်ကရောဂါလက္ခဏာကိုကုသနေတာမဟုတ်ပါ။ Thread လင့်ထားသည်
ဆရာဝန်တွေကအရူးတွေပါ။ ငါဒီနှစ်များစွာသောငါအိပ်စက်ခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ကြိုးစားနေတာမြင်ဖူးတယ်။ သူတို့မှာသဲလွန်စမရှိဘူး။ မင်းမှာသေနတ်ဒဏ်ရာရှိရင်ဘာလုပ်ရမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူး .. ဒါပေမယ့်အသက်ကိုခြိမ်းခြောက်တာနဲ့ယေဘုယျကျန်းမာတာမှလွဲရင် .. သူတို့ကဟာသပဲ။ rant အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နောက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုနောက်တစ်ခုငါလာနေတယ်။ ငါတင်လိုက်မယ်
ငါပြောချင်တာကအရင်ကငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကငါ့ကိုနူးညံ့စေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်ငါကအပြည့်အဝမနှိုးဆွနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကောင်းပြီငါပြီးခဲ့တဲ့ညမှာအဲဒီအတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအသစ်နှင့်အတူသွားလိုစိတ်ထက်သန်ခဲ့သည်။
nofap ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့ပုံရသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ယောက်ျားတွေ။ မည်သူမဆိုစိတ်ဝင်စားသည်ဆိုပါကငါသည်ငါ့ 90 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် ဒီမှာ.
LINK - ညစ်ညမ်းမှုကသင့်ကိုဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ငါпорно ED ကိုစတင်ခံစားခဲ့ရတယ်၊ မင်းငါထင်သလိုမျိုးတော့မခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ခက်အောင်နေဖို့ခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့များသောအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားပြီး၊ ၎င်းသည်ကူညီသည်။ သို့သော်ဤ subreddit ကိုတွေ့သောအခါ၎င်းကိုလုံးဝရပ်တန့်ခြင်းသည်အကျိုးရှိမည်ဟုငါသိသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အခက်အခဲများစွာမရှိသောကြောင့်၊ ထိုအတိုင်းထားပါ
LINK -ငါကခင်ဗျားယောက်ျားလိုပဲငါက ၁၉ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါ၌ရှိသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာများအားလုံးကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ED ရလိမ့်မည်ဟုအိပ်မက်မမက်ခဲ့ပါ။ ထို့နောက်လအနည်းငယ်အကြာအင်တာနက်ပေါ်မှအစွန်းရောက်အရုပ်များကိုအဆက်မပြတ်ရိုက်နှက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝလုံးဝဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်နွေရာသီ / ပထမနှစ်ကျောင်းသားများအတွက် ED အဖြစ်အပျက်များစွာကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ကိုက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သူမသည်အလွန်အထောက်အကူပြုသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုနှိပ်လိုက်သည်။ ဒီဟာနက်ရှိုင်းစွာထိုင်နေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာ၏ရလဒ်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပုံစံများနှင့်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုစတင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ ED နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။
အသေသတ်ခြင်းကိုဆုပ်ကိုင်, DE, Porn သွေးဆောင် ED ။ အကွံဉာဏျ?
by noseehearspeak4 ရက်ပတ်လုံး
ဟေး၊ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၊ ပထမ ဦး ဆုံးငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်ပြီးငါရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ငါကအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကစပြီးနေ့စဉ်အများအားဖြင့် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်ကိုလက်တွေ့မဆန်သောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ကိုမသိခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်ယောက်ျားများနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးရတိုင်း DE မှခံစားခဲ့ရသည်။ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံတာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအချိန်အကြာကြီးယူပြီးငါကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ရတော့မယ်။ ငါသေတယ်ဆိုတာကို DE မသိဘူး၊ ငါကနည်းနည်းလေးခက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်မကြာသေးမှီကငါသိပ်ကြိုက်တယ်အဘယ်သူကိုရည်းစားရတယ်နှင့်အလွန်ငါ၏အ type ကိုအဘယ်သူသည်။ လိင်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်များအတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါသည်အပင်ကိုသူနိုင်အောင်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်ခဲ့အဓိကအားသောကွောငျ့, တကယ်လျင်မြန်စွာဖြစ်ချင်နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည် DE နှင့်ယခု ED ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးခံစားခဲ့ရသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်“ အစွန်းရောက်” အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်၊ သူသည်သူ့ကို cum ကိုမြင်ခြင်းနှင့်သူ၏ cum နှင့်ကစားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါကငါ porn အတွက်အများဆုံးနှစ်သက်သောအရာတစျခု။ ထိုအခါငါစိုက်ထူစောင့်ရှောက်ပင်ပြproblemsနာများရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသိသည်မှန်သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်သည်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုတွေ့ဖို့ပြွန် site ရှိအခြားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်။ မရပါ။
ဒါဟာကြင်နာငါ့ကိုစိုးရိမ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအနည်းငယ် googled နှင့်အပေါ်သို့လဲ http://yourbrainonporn.com ငါတော်တော်များများငါဖြတ်သန်းသွားအရာကိုရှင်းပြသည်။ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တလျှောက်မှာများစွာသော tabs များစသည်တို့အပေါ်တစ် ဦး တည်းအခါ၌သာစိုက်ထူခြင်း / သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းရှိသည်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးစက်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ ငါက porn ကိုလုံးဝမကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က porn ကိုလုံးဝကြည့်ခြင်း၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူး၊ အခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အရကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှအပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်တစ်လမှတစ်နှစ်အထိကျွန်ုပ်လိုအပ်နိုင်သည်။
ဒါကငါ့ကိုတကယ်စိုးရိမ်ပူပန် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်ဝက်မျှမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်ဤဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခုက reboot လုပ်နေစဉ်မှာ noFap လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းအကြံပေးတာပါ။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကလိင်တူချင်းချစ်တာ၊ စအိုဖြင့်အမြဲတမ်းစအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိပါ (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိပြproblemsနာများကိုတက်တက်ကြွကြွမလုပ်နိုင်) ။ ငါရည်းစားနဲ့အတူရှိနေရင်ငါတောင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်မလား။
ဒီနေရာမှာဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သောယောက်ျားများသာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါသည်။ သို့သော်မည်သည့်လမ်းကိုဖွင့်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါရည်းစားကိုတကယ်ချစ်တယ်၊ ခြောက်လအကြာ၊ တစ်နှစ်ဝက်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးရင်၊ ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးသေခြင်းတရားကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပြီးနောက်သူ့ကိုတွေ့ခွင့်ရချင်ပါတယ် ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ဟုငါခံစားရတယ် ကျွန်ုပ်အနာဂတ်အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်ုပ်ဤသို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ယခုတွင်ငါသည်ငါမိန်းကလေးတွေတပ်မက်, porn တပ်မက်လေ့ရှိတယ်။
အဆိုပါ reboot အမျိုးသမီးဆီသို့သင့်ရဲ့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲဘယ်လိုတကယ်ပဲရယ်စရာ။
ဒီရက်သတ္တပတ်အတွင်းငါမိန်းကလေးများအတွက်တကယ့်ကိုဆိုးရွားတဲ့စွဲလမ်းမှုတွေရတယ်။ ငါအခုတ ဦး တည်းနှင့်အတူဖြစ်ဖို့တပ်မက်။ ငါမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါ့ခေါင်းကမှုတ်နေပြီ! testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်လာသလား။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုပြောပြပေမယ့်ငါတကယ်ကသူတို့ကိုတပ်မက်။ ငါ့မှာလိင်တံပေါက်ကွဲတော့မယ့်ကျောက်တုံးကြီးကအရမ်းခက်တယ် (testosterone ဟော်မုန်းနဲ့ဆက်စပ်တယ်။ နံနက်သစ်သား dopamine ဆက်စပ်မှု) ။ ငါအိပ်ချိန်တောင်မှသူတို့ကိုငါနေ့တိုင်းရတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိမိန်းကလေးများနှင့်ပုံမှန်စကားပြောသည့်အခါ (sexting မပါသော်လည်းသူမနှင့်သူမချိန်းတွေ့လိုသည့်အချိန်ကာလ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းဆွေးနွေးခြင်းစသဖြင့်) သင်အလွယ်တကူစိုက်ထူခံရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာနံနက်တောအုပ်လေးနည်းနည်းပဲနဲ့ကျွန်တော် ၈ ပတ်မှာရှိခဲ့လို့ပါ။
ယနေ့ငါ့စကားသံကိုယခုကြှနျုပျတို့အားလုံးအတှကျပုံမှန်အတိုင်းသောယုံကြည်မှုနှင့်အခြားသူများ၏လစာတိုး, reboot အကြောင်းပြောနေတာမရှိဘဲပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ငါက LOVE တယ်။
ဒီအသစ်လုပ်တဲ့ reboot ထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကမိန်းကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပဲ။ rewiring လိုပါပဲ အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းထဲမှာတကယ်ပဲအရမ်းရယ်ရတယ်။
Edit ကို: အဘယ်သို့ငါသင်ယူကြ up ပြုလုပ်အမြန်နှုန်းဟာ reboot သို့မိန်းကလေးငယ်များမိတ်ဆက်နေပါသည်!
သူတို့ဟာ Nofap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့ထူးခြားဆန်းကြယ်နက်နဲသောအရာတခုကိုတွေ့ပြီဟုခံစားမိပါသလား။
အခုတော့နှစ်ပတ်။ အားကောင်းနေ Pap ကိုကြည့်ရှုရန် (သို့) Porn ကိုကြည့်ရှုရန်အမှန်တကယ်တိုက်တွန်းခြင်းမရှိပါ။ ငါ့ငပဲဟာ hibernation ထဲဝင်သွားသလိုပဲလို့ထင်တာဖြစ်နိုင်တယ် တစ်ပါတ်နီးပါးအတွင်းရှိအဲဒီမှာဆင်းမရှိခံစားမှု။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မျှော်လင့်ခဲ့ရာပါပဲ။
လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်အတွင်းတစ်ရက်လျှင် ၁-၂ ကြိမ်ခိုးယူခဲ့သည်။ ငါဒီနေရာ, အင်ဖိုနှင့်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုရှာမတွေ့မှီတိုင်အောင်မျက်မှောက်၌မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲ ED နေရာတစ်လျှောက်လုံး ED ။ အခုတော့ငါဘယ်သူမှရှာမတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုထဲကိုဝင်သွားသလိုပဲ။
ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်အားလုံး PMO အားလုံးငါလုပ်သမျှလောက်ပဲမပိုဘူး၊ သူတို့တံခါးပိတ်နောက်ကွယ်မှငါတို့ကဲ့သို့တူညီသောပြproblemsနာများခံစားနေရသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ ငါကသူတို့ကို PMOing နဲ့ MOing အကြောင်းမပြောတော့ဘူးသူတို့ကရယ်ကြတာ။ သူတို့ကလူ့အဖွဲ့အစည်းလိုပဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်လုံးဝကျန်းမာပြီးပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ ဒါနဲ့နောက်ဆုံး ၂ ပတ်ကကျွန်တော့်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံး ၂ လထက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာသိပြီးသူတို့ကိုရယ်လိုက်တာပါ။ ငါဟာစွမ်းအင်၊ ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း (ရှုထောင့်ပေါင်းစုံ) မှာပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာတယ်။ အအေးမိတဲ့ကော်ဖီအသစ်တွေ၊ ငါသောက်တော့မယ်၊ တစ်နေ့တာမှာ (ငါ fapping ပြီးနောက်အမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုခု) မှာမောနေခြင်းမရှိတော့ဘူး၊ ဘဝအပေါ်ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါအခုအများကြီးပိုအပြုသဘော im ။
ဒါက ၂ ပတ်အတွင်းမှာပဲ။ တစ်နှစ်သို့မဟုတ် ၅ နှစ်ဆိုပါစို့။ မျှော်လင့်ထားသည့် ED ထို့နောက်အားဖြင့်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ဒီမှာတစ်ခုခုရှိနေတယ် လူတွေဟာ PMOing လုပ်နေတာကြာပြီဖြစ်လို့ဘဝဟာဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားကြတယ်။